တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: February 2007
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တောင် ရောက်လာပြန်ပြီနော် … ။
ကိုပြူးကျယ်အတွက် ပေးစာကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း တင်မယ်လို့ လောလောဆယ်တော့ စိတ်ကူးထားပါတယ်။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် (ဥပမာ - အင်တာနက် အဆင်မပြေလို့) မတင်နိုင်ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ ကြိုတင် တောင်းပန်လိုက်ပါရစေ … ။ နိုင်ငံရေးရာ အဖြာဖြာထဲက ကောက်နုတ်ချက် တွေကိုတော့ သောကြာနေ့မှာ တင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူး ကဗျာ၊ သောကြာ နိုင်ငံရေးရာ … ဆိုပါတော့။
ဒီကြားထဲမှာတော့ ရပ်မနေနိုင်တဲ့ ဦးနှောက်က ပေါက်ကရ အတွေးတွေကို အေးအေး မနေနိုင်တဲ့ လက်က လျှောက်ရေးပြီး တင်မိတင်ရာတွေ တင်နေပါဦးမယ်။
ကဲ .. ကဲ … ဒီတပတ်အတွက် လေးချိုးခန်းကို ဆက်လိုက်ကြပါဦးစို့ရဲ့ … ။
ဟိုတပတ်က လေးချိုးလတ်မှာ ရပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့တော့ ကာလပေါ်လေးချိုးကြီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်ရေးပါမယ်။
ကာလပေါ် လေးချိုးကြီး နှစ်မျိုးထဲက စာထောင့်လေးချိုးရေးနည်းမှာ ဆိုရင် …
အချိုးအားဖြင့် -လေးချိုးလတ်လိုပဲ အချိုး ၄ ခု ရှိရပါမယ်။
ပိုဒ်ရေအားဖြင့် - ပထမချိုး၊ တတိယချိုးတို့မှာ အနည်းဆုံး ၃ ပိုဒ်မှ အများဆုံး ၇ ပိုဒ်ထိ ထားနိုင်ပါတယ်။ (၄-၅ ပိုဒ်သာ အထားများတယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။) ဒုတိယချိုး နဲ့ စတုတ္ထချိုးတို့မှာတော့ အနည်းဆုံး ၇ ပိုဒ် မှ အပိုဒ်ပေါင်းများစွာ လိုသလောက် ထားနိုင်ပါတယ်။ ထို ၂ ချိုးမှာလည်း ဒုတိယချိုးထက် စတုတ္ထချိုးမှာ အပိုဒ် အများဆုံးထားပြီး ရေးလေ့ရှိတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
အက္ခရာလုံးရေအားဖြင့် - ဒုချိုးရဲ့ အဆုံးပိုဒ်မှာ ၄ လုံးသာထားရမှာ ဖြစ်ပြီး စတုတ္ထချိုးရဲ့ အစပိုဒ်မှာ ၃ လုံး (သို့) ၄ လုံးသာ ထားရပါမယ်။ ကျန်အပိုဒ်တွေမှာတော့ အနည်းဆုံး အက္ခရာ ၆ လုံးမှ အများဆုံး ၁၅ လုံး ၁၆ လုံး ထားနိုင်ပါသတဲ့။ ဒီထက် ပိုပြီး အက္ခရာတွေများရင်လည်း ရွတ်ဖတ်သီဆို တဲ့အခါမှာ လေမမှီလို့ စည်းဝါးလည်း မလိုက်နိုင်ဘဲ အခက်အခဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စာထောင့်လေးချိုးနဲ့ လေးချိုးလတ် ကွာခြားချက်ကတော့ စာထောင့်လေးချိုးမှာ ပိုဒ်ရေများခြင်း လုံးရေများခြင်း မျှသာ ပိုထူးပါတယ်။ ကာရန်ကူးဆက်ပုံ လေထားလေယူ တို့ကတော့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြမယ့် နမူနာ စာထောင့် လေးချိုးကြီး ၂ ပုဒ်ကို ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။
မန္တလေးမြို့၊ အချုပ်တန်းဆရာဖေ ရေး “နေပြည်တော် အလွမ်းဖွဲ့ စာထောင့်လေးချိုးကြီး”
မြတ်ကောဇာ လှစ်ဆိုပြရမှာဖြင့်၊ သတ်ဇောဒွါ-ဧစ်ကိုကျကာမှ၊ ခေတ်ညိုလှ-မြန်မာပြေ၊ (အမယ်လေး) “ဟစ်ငိုစရာ့-အခါပေ”။
မသွေစောင်းပေဘု၊ ရေကြောင်းဗျူဟာချီ၍၊ တူရာသီဆန်းရက် ငါးမှာလ၊ နယ်ခြားမြေ ကျောက်တိုင်ရပ်ဆီက၊ ကင်းတပ် သင်္ချေကိုနောက်ကွယ် “ခွင်းဖြတ်ဝင်မွှေ”။ … ။
ရက်အဋ္ဌာကြုံအတွင်းမှာတော့၊ စက်မဟာအဟုန် ပြင်းတာကြောင့်၊ မင်းလှမြို့မှန်ဆိုက်လေ၊ ရန်မိုက်ချွေမဲ့ မြန်မာများ “ခံတိုက်ပေမဲ့ အကွာသား”။
စခန်းငယ်ယှဉ်၊ လမ်းအစဉ် တပ်တော်ရှိပြီဘု၊ သူတင်းလျှံ မြင်းခြံထိကာမှ၊ အသိဥာဏ် နုစတောင်းငယ်နှင့်၊ က၀ိဟန်-ပြုမူကောင်းသူက၊ အကြောင်းကို မမြင်လေ၍၊ စကားပြေ ပြောရင်လွှတ်ပါဖျ၊ ပြားဝတ်ကာ ရှိပန်တောင်းတာကြောင့်၊ ကျောက်မြောင်းဝန် အမြန်ပြေးရှာရ၊ အရေးပိုင် မိန့်ဆိုချက်မှာလ၊ လက်နက်ကုန် အပ်နှံသ’လျှင်ဖြင့်၊ ခွင့်လိုရာ တောင်းပန်ပမယ်လို့၊ ချိုလှစွာ ဥာဏ်နီစွက်ထာမို့၊ ခွင့်လိုရာ ယူစေလို့ မြွက်မိတယ်၊ (အမယ်လေး) ပျိုးပျက်သွယ်ဘွား။ … ။
[ဘုံတပြည်စံ မှောက်လှန်မည်ပ၊ မိုးထက်ကြယ်များ၊ ကုန်အညီပြန် တောက်လျှံချီပ အမတ်တွေ မြင်းထက်ဖျင်း၊ ငကင်းခေါင်ဖျာ့ သိုက်မြညှာအပ် မဘွေရှစ်ရက်တွင်း …၊ အတင်းဆောင်သွား၍ လိုက်ရရှာ၊ ဆက်ဆက်ယူမတဲ့ ဆိုတ’ကာ၊ ကြွက်ကြွက်ဆူသနဲ့ ငိုကြရှာ၊ ရက်စက်သူမကွဲ့ ချိုလှစွာ၊ ထိုခါ-ငိုရှာ ဗိုလ်ပါ လူတလွှားငယ်တို့၊ ရိုင်းလေ-မှိုင်းဝေ-တိုင်းပြေ ပစ်ခွါသွားရှာရတယ်၊ (အမယ်မင်း) အ၀ါးမ၀ငြား၊ တရားဓမ္မ မမှားရှာဘု၊ (သခင့်ကိုကွယ်) သိကြားကလဲ မ၊ မယားလှရယ်ကြောင့်၊ ကုလားက သဘောင်္နှင့် တင်ယူပါပြီ တကား။]
မှတ်ချက်။ ။ [ … ] ဤကွင်း အတွင်း စာသားမှာ လေးချိုးကဗျာမဟုတ်၊ အဓိပ္ပါယ်စုံလင်ရန် သံဆန်းဆက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာ ဆရာလွန်း ရေးသားသော ဘွိုင်းကောက်ဋီကာ ကျမ်းမှ “ကာလပေါ် စာထောင့်လေးချိုးကြီး”
တဇေယျုံ-ချောင်တွေ မြှောင်ဘွေ မြန်းခဲ့ရပါတော့၊ ရွှေတိဂုံ တောင်ခြေခပန်းတွင်မှ၊ ညောင်သပြေပန်းတွေနှင့်-သွန်းသနဲ့ ကသိုဏ်းရေဗြဟ္မစိုရ်၊ (ကွယ်တို့ရယ်) “အောင်မြေဗဟန်းဆီသို့-လွန်းရဲ့ မှိုင်းရွှေကိုယ်”။
အော် … ဇရပ်အမတို့ကိုလ၊ အမှတ်ရမိတဲ့ပြင်၊ ကဿပထေရ် အရှင်ဆရာစံတဲ့၊ သာလာယံ အထိကရ ကျောင်းရဲ့ပြင်၊ စာဝါတညံညံ တပည့်မအပေါင်းတွေနှင့်၊ မဂ်ကြောင်း-ဖိုလ်ဝင်လှည့်ပေမဲ့၊ အရိယာ လင်္ကာခေါ်သည့်၊ မင်္ဂလာအကျော်အမော်-အရာမ်တွင်းရဲ့ပြင်၊ မှန်ကင်းနေရဒင်သို့၊ မြေပလ္လင် ရွှေကျင်တိုက်ဆီသို့၊ ဦးခိုက်ကာ ပဏာလှုံလို့မို့၊ အညာရဂုံ-တောဟိတ် ၀ါသနာမသေးသူက၊ တအာရုံ-မနောစိတ်မှာ မအေးသော်လဲ၊ တွေးဆ-ကြည်ညိုတယ်နော်ကွယ် … ၊ “ဝေးကမှီခို”။
စိန်စမုခ် အဆောင်ဆောင်-အလျှံမနော် ပတ္တမြားတွေနဲ့၊ သိင်္ဂုတ်တောင် ဆံတော်ဘုရားကိုလ၊ အော် … အများသော တပည့်တွေနဲ့ ကတိတောင်းဆုဆို၊ ကောင်းမှုထိုထိုရယ်နှင့် ဓမ္မရွှေဗျာကျွေး၊ ၎င်း “ကုသိုလ်တွေကိုဖြင့် အမျှ အမျှ ဝေကာပေး”။
ကောလိပ်အပျက်တွင်၊ ဇောစိတ်လက် ဆရာ မရွှင်သနဲ့၊ အညာတခွင် လှည့်ခဲ့ပြီး၊ ဇာတိမြေ အလုံကျေးပေပေါ့၊ မုံရွေးမှာ တနွေကြာတော့၊ ဇေယျာသူ ကေသာတို့ ပင့်ပေသမို့၊ အခွင့်ကြုံရာ တွယ်ရော့မကွဲ့လို့၊ ပုညာစွယ်-တောင်ခပန်းတွင်မှ၊ အောင်ပန်း ကဗျာဂီတာတို့နဲ၊ ရှောင်မလမ်း ယာယီသာဘို့လို့၊ ဆရာသည်တ၀ါမှာ ပါရမီမာလာ ကလေးတို့ရဲ့ပြင်၊ ဆေးပေးမီးယူ နှစ်ကျိပ်ကျော်မျှတွင်မှ၊ အနှိပ်တော် ဒကမတွေ စုံညီညာနှင့်၊ ယမုံသီတာ တောင်ခြေ၀ိုင်းပေတဲ့၊ ဘုံသီဟာ အောင်မြေကသိုဏ်းတွင်မှ၊ (အမယ်မင်း) သမိုင်းအလျှောက်-တဂိုဏ်း တဂိုဏ်း မထောက်တဲ့၊ ကြောက်ဖွယ့် ပြည်ရွာအရေးပေမို့၊ အော်… ‘မှိုင်းတယောက် အနှီတ၀ါဖြင့် မအေးရပေဘု”၊ (စန္ဒာရယ်) “စစ်ကိုင်းချောက်ဆီက-ဘွိုင်းကောက်ဋီကာရေး”။ … ။
ကိုပြူးကျယ်နှင့်တကွ မြန်မာကဗျာ စစ်စစ်ကို ချစ်တဲ့သူများ ဒီတပတ်တော့ ဒီလေးချိုးကြီး နှစ်ပုဒ်နဲ့ပဲ ကျေနပ်ကြပါဦး။ လေးချိုးအခန်းက မပြီးသေးပါဘူး၊ ကျန်နေသေးတဲ့ သံချိုလေးချိုးနဲ့ ရှေးလေးချိုးကြီးကို ရှေ့တပတ်မှာမှ ဆက်ပါရစေတော့ရှင် … အိပ်ချင်နေလို့ပါ။
ချမ်းမြေ့သောနေ့ ဖြစ်ကြပါစေ … ။
Posted by မေဓာဝီ at 3:28 AM 1 comments
Posted by မေဓာဝီ at 4:13 AM4comments
ဒီနေ့ မနက် အိပ်ရာက နောက်ကျမှ နိုးသည်။
အိပ်ခန်း မှန်ပြတင်း ခန်းဆီးကြားမှ နေရောင်ကျဲကျဲ ကို မြင်မှ နောက်ကျ နေပြီ ဟူသော အသိဖြင့် ကမန်းကတန်း ထလိုက်ရ၏။ နာရီကို ကြည့်တော့ ၇ နာရီ ထိုးနေပြီ။
ညက တော်တော်နှင့် အိပ်မပျော် … ။
ရာသီဥတု ပူအိုက်အိုက်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ လေအေးစက် ခပ်စုတ်စုတ် ကလည်း တနေကုန် ပူထားတဲ့ အပူရှိန်ကို အန်မတုနိုင်ပြီလား မသိ။ အားသွန်ခွန်စိုက် အသံတွေမြည်ကာ ခုတ်မောင်း လည်ပတ်တာတောင် အအေးဓာတ်ကို ၀၀လင်လင် မပေးနိုင်ခဲ့။
ပြာလဲ့လဲ့ အလင်းရောင်ပေးသည့် အိပ်ခန်းထဲမှ ညမီးအိမ် ကလေးကလည်း ညကမှ ကျွမ်းသွားသည်။ မီးခလုတ်ကို အဖွင့်မှာ ဖြတ်ကနဲ အလင်းရောင် တချက် ထွက်သွားပြီးနောက် မှောင်ကျသွားသည်။ တန်တော့ မီးသီး ကျွမ်းသွားခြင်းပဲ ဖြစ်မည်။ ဒီလိုနှင့် … ကွန်ပျူတာကို ပိတ်၍ အိပ်ရာဝင်သည့် အချိန်က သန်းခေါင်ကျော်ပြီး ၁ ချက်တီးပင် ရှိနေပြီ။ ခေါင်းအုံးပေါ် ခေါင်းအချမှာ သံချောင်းခေါက်သံ ဒေါင်ကနဲ တချက် ကြားလိုက်ရသေး၏။ အိပ်ရာပေါ်ရောက်သော်လည်း ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်နေသည့် အမှောင်ထုထဲတွင် မျက်လုံးတွေက ကြောင်တောင်တောင်။ ကြိုးစား အိပ်သော်လည်း မပျော် … ။
အိပ်မရတဲ့အဆုံး ကွန်ပျူတာ ပြန်ဖွင့်ဖို့ စိတ်ကူးမိသေးသည်။ သို့သော်လည်း မျက်စိအစုံက ခံနိုင်ရည်မရှိတော့။ တနေကုန် ဒီအလင်းရောင်ကို ကြည့်နေရတာ ပင်ပန်းလှပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ မျက်စိကိုမှိတ်ပြီး အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ် စိတ်ထဲက လိုက်မှတ်နေမိပြန်၏။ ကြာရင်များ အိပ်ပျော်သွား လေမလား … ။ နှာခေါင်းတွေသာ ထူထူပူပူ ဖြစ်လာသည် အိပ်ချင်စိတ်က မရှိ။ ဒီလိုနဲ့ အတိတ်တွေ ပစ္စုပ္ပန်တွေ အနာဂတ်တွေ …ထွေရာလေးပါး အတွေးများရင်း နောက်ဆုံး ဘယ်လိုက ဘယ်လို အိပ်ပျော်သွားသည် မသိ …။ မိုးလင်းခါမှ နိုးလေတော့သည်။
မနက် ၇ နာရီ နေရောင်က ခါတိုင်းကဲ့သို့ နေခြည်နုနု မဟုတ်။ စူးစူးရှရှ ရှိလှသည်။ ဈေးအသွား လမ်းမှာ တိုက်ကြို တိုက်ကြားက နေရောင် တစွန်းတစ လူကို ထိတာတောင် ပူနေပြီ။
နွေရာသီကို တကယ်ပဲ ရောက်လာခဲ့ပြီပဲ … ။
လေကလည်း ရူး ..
နေကလည်း စူး …
သြော် ..နွေကပဲ .. ဦးသွားခဲ့ပြီလား …။
နွေရဲ့ ကန့်လန့်ကာ တချပ်
လှပ်ခဲ့ရပြန်ပေါ့ … ။
ဆောင်းနေနဲ့မှ မတူတာ ..
အပူပြင်းပြင်း .. အပြင်းပူပူ
နှင်းတွေထူတဲ့ မနက်ဖက် ..
ဆောင်းက နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီလား … ။
နှင်းလား မြူလား …
ရင်ကို တင်းကျပ်စေခဲ့တယ် … ။
သစ်ရွက်လေးတွေမှာ ခို ..
အို .. နှင်းရယ် မငိုပါနဲ့ … ။
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ပင်မမှာ ကျောင်းတက်နေစဉ် ကာလတုန်းက ခုလို နွေဦးအ၀င် ရာသီမှာ ရေးခဲ့သော စာတပုဒ်ကို ပြန်သတိရမိ၏။ မနက်စောစော ကျောင်းသို့လာပြီး အတန်းမရှိတာကြောင့် အင်းယား ကန်စပ် တယောက်ထဲ ထိုင်ရင်း ဒီစာလေး ရေးခဲ့မိသည်။ အဲဒီမနက်တုန်းက အင်းယား ကန်ရေပြင် တခုလုံး မြူတွေပိတ်ဆိုင်း နေတာကို ခုထိ အမှတ်ရမိဆဲ။
ရာသီအကူး အပြောင်းလေးတွေတိုင်း စိတ်ထဲက မှတ်မှတ်ရရ အမြဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ရာသီပြောင်းချိန်၏ သဘာဝ ရှုခင်းက ရာသီတွေ ဘယ်နှစ်ခါ ပြောင်းပြောင်း မဟောင်းနိုင် … မနွမ်းနိုင် … မရိုးနိုင်စွာ ခံစားရ စမြဲ။
အခုလည်း …ဆောင်းက မခွဲခွါချင့် ခွါချင်ဖြင့် တဖြည်းဖြည်း ခွဲခွါသွားချိန်မှာ …နွေကလည်း မလာချင့် လာချင် ဖြင့်လားတော့မသိ … တစတစ ချင်းနင်း ၀င်ရောက်ခဲ့ပါပြီ … ။
အပြောင်းအလဲကို စိတ်ထဲက လက်ခံနိုင်သော်ငြား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့ ကသိကအောက် ဖြစ်စရာလေးတွေ အနည်းနှင့်အများ ကြုံကြရပေသည်။
ခံနိုင်ရည်မရှိသူများဆိုလျှင် ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ များသောအားဖြင့် ကိုယ်လက် မအီမသာ နေထိုင် မကောင်း ဖြစ်တတ်ကြသည် မဟုတ်လား။
ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲမှုမျိုးကို ကြုံတဲ့အခါ ခုလို ဖြစ်တတ်တာ သဘာဝပေပဲ … ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ … မည်သည့် ပြောင်းလဲမှုမျိုးကို မဆို တကယ်တမ်း ကြုံကြိုက်လာပါက ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ခံနိုင်ရည်ရှိစေရန် လေ့ကျင့် မွေးမြူ ထားကြရမည်သာ။
Posted by မေဓာဝီ at 8:50 AM2comments
Posted by မေဓာဝီ at 3:09 AM 8 comments
((((( အား )))))
အလန့်တကြား အော်ပြီး ရုန်းကန် လှုပ်ရှားမိသည်။
ခေါင်းကိုတွင်တွင် ခါယမ်းပြီး ထိုသတ္တ၀ါကြီးနှင့် ဝေးရာကို ထွက်ပြေး သွားလိုက်ချင်သည်။
သို့သော် ကိုယ်ခန္ဓာ တခုလုံးက ကျောက်ချထားသည့်နှယ်။
ချွေးစေးတွေ ပြန်လာပြီး မောဟိုက်နေစဉ်မှာပင် … ကြီးမားပြီး အဆိပ်ပြင်းသည့် ပင့်ကူကြီးတကောင်က သူ့ဦးခေါင်းခွံကို ဖောက်၍ ဦးနှောက်ဖြူဖြူ များကို အားပါးတရ စားနေလေတော့သည်။
ဒီနောက်မှာတော့ တကိုယ်လုံး ချွေးတွေရွှဲကာ အိပ်ရာမှ အလန့်တကြား နိုးထလာလေသည်။
ဦးခေါင်း တခုလုံးက လပ်ဟာနေသလို … ကိုယ့်ခေါင်းကိုယ် ကယောင်ကတမ်း ပြန်စမ်းကြည့်မိသည်။
ဒါဟာ … အိပ်မက် မက်နေတာပဲ …
သက်ပြင်းတချက်ကို ဟင်း ခနဲ ချလိုက်မိ၏။
ဒါကတော့ … လွန်ခဲ့တဲ့ ဘယ်နှနှစ်ကလဲ မမှတ်မိတော့ပါ (၁၉၉၁-၉၂ ခန့်ကလို့ ထင်ပါတယ်) … စန္ဒာမဂ္ဂဇင်း မှာ ဖော်ပြခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ ကျမရဲ့ ၀တ္ထုတို လေး တပုဒ် အကြောင်း တစွန်းတစ မှတ်မိသလောက် ရေးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၀တ္ထု ခေါင်းစဉ်ကတော့ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း “ဦးနှောက်ဖောက်စား ခံရခြင်း” ပါပဲ။
ဒီဝတ္ထုလေးကို တကယ်ပဲ မေ့နေခဲ့မိတယ်။ စန္ဒာမဂ္ဂဇင်းမှာ ဆရာကြပ်ကလေး အယ်ဒီတာအဖြစ် တာဝန်ယူ နေစဉ်က ကျမရဲ့ ဒီဝတ္ထုလေးကို ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ ကျမ တွေ့ဖူးသမျှ အယ်ဒီတာတွေထဲက ကျမလေးစား မိတဲ့ အယ်ဒီတာတွေထဲမှာ ဆရာကြပ်လည်း တယောက်အပါအ၀င်ပါပဲ။
ကြုံတုန်း ဆရာကြပ်အကြောင်း နည်းနည်း လောက် ပြောချင်ပါတယ်။ သူဟာ ရောက်လာသမျှ ၀တ္ထု ဆောင်းပါး အားလုံးကို ဖတ်ပြီး ရွေးရင် ဘာကြောင့်ရွေးတယ် … မရွေးရင် ဘာကြောင့် မရွေးဘူးဆိုတဲ့ မှတ်ချက်တွေကို စာမူမှာ အမြဲ တွဲပေးထားပါတယ်။ ကျမ အပယ်ခံရတဲ့ စာမူတွေမှာ ဆရာကြပ် လက်ရေးလေးတွေနဲ့ မှတ်ချက်တွေ ပေးထားတာ ခုထိ သိမ်းထားပါတယ်။ အဲဒီလို ဆရာကြပ်ဟာ စာရေးသူတွေအပေါ် ကလောင်ကြီး-ငယ် မရွေး လေးစားမှု ရှိပြီး တာဝန်ကျေတဲ့ အယ်ဒီတာ တယောက်ပါ။
ဆရာကြပ်ကို ခဏရပ်ပြီး .. ၀တ္ထုအကြောင်း ဆက်ပြောပါဦးမယ်။
ဒီဝတ္ထုရေးဖြစ်တာကတော့ စာပေနယ်မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ရှဲဒိုးတွေ … သူများအိုင်ဒီယာကို မသိမသာ တမျိုး သိသိသာသာ တသွယ် မှီငြမ်း ကူးချတဲ့သူတွေ ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီလိုလူတွေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် စာပေနယ်မှာ ရှိခဲ့ပါတယ်၊ ရှိနေပါတယ်၊ ရှိလည်း ရှိဦးမှာပါပဲ။ ဒီလိုလူစားမျိုးတွေကို ကျမကတော့ သူများ ဦးနှောက်ဖောက်စားတဲ့ သတ္တ၀ါတွေလို့ သတ်မှတ်ြပီး ဒီဝတ္ထုကို ဖန်တီးခဲ့တာပါ။
စောစောက ပြောခဲ့သလို ဒီဝတ္ထုတိုကလေးကို ကျမ မေ့လျော့ နေခဲ့တယ်။ ဟိုတနေ့ကမှ ကိုသံလွင် ဘလော့က “သူတို့ .. သူခိုး” ဆိုတဲ့ စာကိုဖတ်ပြီး ဒီဝတ္ထုတိုလေးကို ပြန်အမှတ်ရမိတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း မူရင်းစာမူကတော့ ပျောက်နေခဲ့ပြီပေါ့။ နှမြောစရာ … ။
ဒီဝတ္ထုလေးအတွက်လည်း စာမူခက ၁၅၀ လား ၂၀၀ လား ရခဲ့ဖူးပါတယ်။ မှတ်မိနေတာကတော့ စာမူခသွားထုတ်တဲ့ အချိန်မှာ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေသူ အန်တီမမရဲ့ ဆက်ဆံရေး ပါပဲ။
အယ်ဒီတာ ဆရာကြပ်ဟာ စာမူခလို ငွေရေးကြေးရေး ကိစ္စမျိုး တာဝန်မယူပါဘူး။ စာမူခနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရင်ဆိုင်ရတာက ကွယ်လွန်သူ ဦးဝင်းဦးရဲ့ အမွေကို ဆက်ခံခဲ့တဲ့ အန်တီမမကြီးပါပဲ။
သူ့မဂ္ဂဇင်းမှာ စာရေးတဲ့သူကို ဆက်ဆံပုံများ သူ့ဆီ ပိုက်ဆံလာချေးတဲ့ သူ မှတ်နေသလား မသိပါဘူး။ ဒီပိုက်ဆံလေးရဖို့ စောင့်ရတာလည်း အကြာကြီးပါ၊ ပေးပြန်တော့လည်း ဟောင်းပေ့ နွမ်းပေ့ ဆိုတဲ့ ပိုက်ဆံလေးတွေ ရွေးချယ်ပြီး ပေးခဲ့ပါရဲ့။ ဗိုလ်ချုပ်ခေါင်းနဲ့ ၅ ကျပ်တန် အနွမ်းလေး တွေတောင် ပါသေးတယ်။ အဲဒီပိုက်ဆံတွေကို အောင့်သီး အောင့်သက်နဲ့ လက်ခံ ယူခဲ့ရတာကိုတော့ ခုထိ မမေ့သေးဘူး။
ဒီလိုပါပဲ … ဗမာပြည်က စာရေးဆရာများ အလွန် အောက်ကျ နောက်ကျ နိုင်လှပါတယ်။ အနုပညာစစ်စစ်ကို ဖန်တီး ထုတ်လုပ်သူတွေဟာ ငွေရှင် ကြေးရှင်ကို အောက်ကျို့ရတာ အင်မတန် ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတယ်။
ဟော .. ရှဲဒိုးသမားတွေ …ဖေတော့ မောင်တော့နဲ့ လုပ်စားသူတွေ … ဒါမျိုး စာရေးဆရာ အမည်ခံတွေ ကျတော့ ထုတ်ဝေသူတွေက ခခယယ လုပ်ကြရပြန်တယ်။ သူတို့က စင်ပေါ်ကလေ။
လုပ်လဲ လုပ်လောက်ပါတယ် … ။ သူတို့က ဘက်ဆဲလား (Best Seller)တွေ ဖြစ်နေကြတာကိုး။
ဒီ ဘက်ဆဲလားတွေရေးတဲ့ စာတွေကို တကယ်တမ်း ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်မလဲ အနှစ်သာရ … ။ ဘယ်မလဲ စာပေအဆင့်အတန်း … ။ ရှက်စရာတောင် ကောင်းပါရဲ့ …။
ဒါကိုပဲ ရုပ်ရှင်တွေရိုက် … အကယ်ဒမီတွေ ဘာတွေတောင် ပေးနေကြတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ မြန်မာ့စာပေ အဆင့်အတန်း မြင့်မားဖို့ ဆိုတာများ မျှော်လင့်ချက် ရှိသေးသလား လို့တောင် စဉ်းစားစရာပါ။
ဒီလိုစာပေတွေကို လူအများစု ဘာကြောင့် လက်ခံသလဲ၊ သူတို့ ဘာကြောင့် ဘက်ဆဲလား ဖြစ်နေရသလဲ။ ရှင်းရှင်းလေးပါပဲ … ။
မွန်းကျပ်နေတဲ့ လူအများစုဟာ ထွက်ပေါက်တခု လိုချင်ကြတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်ခွင့်မရတဲ့အခါ … ၀တ္ထုဖတ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ် ချင်ကြတယ်။ ၀တ္ထုထဲက ဇာတ်ကောင် နေရာမှာ ၀င်ရောက် ခံစားပြီး တဒင်္ဂ ထွက်ပေါက်ကို ရှာကြတယ်။ အပြစ်ပြောစရာ မရှိအောင် ရုပ်ကချော၊ ထားစရာ နေရာမရှိအောင် ငွေကြေးကြွယ်ဝ၊ ပညာဆိုတာကလည်း အလွန်ပြည့်ဝ၊ များသောအားဖြင့် ဒီလိုမျိုး ဇာတ်ကောင်တွေ ဆိုတော့ကာ စိတ်ကူးယဉ် လောကထဲမှာ ပျော်မွေ့လိုသူများ အကြိုက်တွေ့ပြီပေါ့။
သွားစမ်းပါ … သဘာဝတွေ .. ဘ၀သရုပ်ဖော်တွေ … ဆင်းရဲတွင်းထဲကကို မထွက်ကြတော့ဘူး။
ဒါတွေဖတ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်လို့လဲ မရ … ပိုပြီးတောင် စိတ်ဆင်းရဲရတယ် ဆိုတော့ … ဒါတွေကို ဝေးစွာ ရှောင်ကြဉ် ကြတော့တာပေါ့။ လူအများစုရဲ့ သဘာဝလေ။
ဒီိစာရေးဆရာတွေ အတွက် ရေးစရာကလည်း မရှားပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ကုလား၊ ဂျပန် စတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ .. အကုန်ထိုင်ကြည့်ပြီး ဟိုထဲက တပိုင်း၊ ဒီထဲက တစ .. ခိုးချလေတော့ သတည်း ပါပဲ … ။ ထုတ်ဝေသူတွေကလည်း ဒီစာရေးဆရာတွေ ကုန်ကြမ်းရဖို့ ကောင်းနိုးရာရာ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေကို တခုတ်တရ ငှားရမ်းပေးတယ်၊ ကြည့်စေတယ်၊ ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ကောင်းတယ် … ဒီလိုဒီလို ပြုပြင်စီမံ ရေးလိုက်ပါ … စသဖြင့် အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်းတွေလည်း ပေးတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဟောတအုပ် …ဟောတအုပ် ဆိုတာ စက်နဲ့ လှည့်ထုတ်သလား မှတ်ရတယ် … ပလူပျံအောင် ထွက်လာ တော့တာပေါ့။
ခိုးချတာတွေ … တုပတာတွေ .. မှီငြမ်းတာတွေ … ဒါတွေကို ဘယ်သူမှ မသိသေးသရွေ့တော့ … ဟုတ်လို့နေပါရဲ့။ တယောက်ယောက်က သိသွားတော့လည်း အရှက်နည်းစွာနဲ့ … ခုလို ပြောကြပြန်ပါတယ်။
“ဒီစာရေးဆရာကို အရမ်းကြိုက်တော့ သူ့စာတွေကို စွဲလမ်း မိလွန်းလို့ သူ့ရဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု ခံလိုက်ရတာပါ …” တဲ့။ တချို့ကတော့ ….
“ဒါကတော့ အိုင်ဒီယာ တူသွားတာပေါ့ … အကြံတူ နောက်လူသာစမြဲ ဆိုတာ ရှိတယ်မှုတ်လား .. ဟင်း ဟင်းဟင်း” တဲ့။ တချို့ကလည်း …
“စု တု ပြု ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း …ခေါင်းထဲမှာ မှတ်မိသလောက် စုဆောင်း ထားတာလေးတွေကို အတုခိုးပြီး ပြုပြင်ရေးသား လိုက်ရတာပါ” တဲ့ ….ကောင်းရော။
လမင်းမိုမိုရဲ့ နာမည်ကြီး “မောင်” ၀တ္ထု ဆိုတာဟာလည်း နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား တခုထဲက မှီငြမ်းပြု ထားတာလို့ သိခဲ့ရဖူးတယ်။
တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ မလုပ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတွေလို့ ထင်မြင် ယူဆမိပါတယ်။
ဒါဆို … ဘာကြောင့် မလုပ်သင့်တာတွေ လုပ်နေကြသလဲ… ။
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် မရေးနိုင်တဲ့အခါ နာမည်ကြီး ချင်တဲ့အတွက် (သို့မဟုတ်) စာဖတ်သူများ ကိုယ့်ကို အထင်ကြီးစေချင်တဲ့အတွက် မလုပ်သင့်တာတွေ လုပ်နေကြတာလို့ပဲ ကျမကတော့ မြင်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကိုယ့်ကျင့် သိက္ခာတို့ အရှက်တရား တို့ဆိုတာ သူတို့မှာ မရှိကြတော့ပါဘူး။
ဆရာကြီး မောင်သာရ က ရေးတတ်ရင် ၀တ္ထု ဖြစ်တယ် လို့ ဆိုခဲ့ဖူးတယ်။ တကယ်ပါ …ရေးတတ်တယ်ဆိုရင် ဘာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို ဖတ်ချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်မှု ရှိအောင် ရေးလို့ရပါတယ်။ အတွေးအခေါ်တွေ အိုင်ဒီယာတွေ တအားကောင်းဖို့ မလိုပါဘူး။ အဓိက က ရိုးသားမှု နဲ့ ကြိုးစားမှု ရှိဖို့ပါပဲ။
ပြီးတော့ … ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ကြီးတွေ ရေးမှ မဟုတ်ပါဘူး … ။ သေးသေးငယ်ငယ်လေးကို ရေးတတ်ရင်လည်း အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရေးနေရင်းနဲ့ ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ ကဗျာလေး ခေါင်းထဲ ရောက်လာတယ် … ရှုပါအုံး။
အပ်ရွှေနဖား … ။
ဒီကဗျာကို ဆရာဇော်ဂျီက တမင် ရေးဖွဲ့ခဲ့တာပါ။ သူများတွေ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ ဖန်တီးရေးဖွဲ့နေချိန်မှာ သူက အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အပ်နဖား အကြောင်းကို တမင်သက်သက် စာဖွဲ့ခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် အကြောင်းအရာ ခမ်းနားကြီးကျယ်မှ ရေးရမယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကိုက်ညီပြီး ကိုယ်ပိုင်ဟန် ကိုယ်ပိုင်အကြံ၊ ကိုယ့်အတွေး ကိုယ့်အရေးနဲ့ ရိုးသားစွာ ရေးကြမယ် ဆိုရင်ဖြင့် …ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သူခိုး ကိစ္စလည်း ပပျောက်တန် ကောင်းပါရဲ့။
ဒါပေမဲ့လည်း တကယ်တမ်း စဉ်းစားကြည့်တော့ သိပ်လွယ်မယ် မထင်ပေါင်။
အရိုးစွဲနေတဲ့ အကျင့်တခုဆိုတာ ဖျောက်ရခက်သားလား။
Posted by မေဓာဝီ at 3:22 AM2comments
တနင်္ဂနွေဆို အဖေက စာအုပ်ဂိုဒေါင်ကို သွားလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေ့ဆို အလုပ်သမား ၂ယောက် ရောက်လာပြီး ဂိုဒေါင်က စာအုပ်တွေ ရှင်းလင်းရေး လုပ်တတ်လို့ပါ။ သူတို့ရှင်းလင်းပြီး သုံးမရ ဖတ်မရတော့တဲ့ ပိုးကိုက် ခြကိုက် စာအုပ်တွေ စာရွက်တွေကို ကုလားတွေကို ခေါ်ပြီးရောင်းတဲ့အခါ အဖိုးတန်တာတွေ ပါကုန်မှာစိုးလို့ အဖေက သွားသွားကြည့် ပေးရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေမှာတော့ အဖေ ဂိုဒေါင်ကပြန်လာပြီး ကျမကို စာအုပ် တအုပ်ပေးပါတယ်။ အမှိုက်ဆိုပြီး လွှင့်ပစ် ထားတဲ့ အပုံထဲက ယူလာတာ … တဲ့။ စာအုပ်ကလေးက တော်တော် ဟောင်းနွမ်း စုတ်ပြတ်နေပါပြီ။
“ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးဘဘေ ၏ နိုင်ငံရေးရာ အဖြာဖြာ ပဌမတွဲ” လို့ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာ ရေးထားပါတယ်။ ၁၉၄၆ ခုနှစ်က ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ။
စာအုပ်ကလေးကို ဖွဖွရွရွ အသာလေး ကိုင်ဖွင့်ပြီး ဖတ်ရပါတယ်။ ကျမက အကိုင်အတွယ် ရိုသေ ညင်သာ လွန်းလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလိုမှ မကိုင်ရင် တစစီ ဖြစ်သွားမှာမို့ပါ။
စာအုပ်ရေးသူ ဦးဘဘေ ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ … သိချင်တာနဲ့ နိဒါန်းကို ဖွင့်ဖတ်ကြည့်လိုက် မိတော့ … နိဒါန်းမှာ ဟံသာဝတီ သတင်းစာ အယ်ဒီတာက ခုလို ရေးထားပါတယ်။
“ဦးဘဘေ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ကို ရေးရသော် ဇိနတ္ထပကာသနီကျမ်းမျှ စာမျက်နှာများစွာ ရေးမှ စုံနိုင်ပေမည်၊ ၀ါကျ တကြောင်းတည်းနှင့် ဦးဘဘေ၏ အတ္ထုပ္ပတ္တိကို ရေးရသော် မြန်မာ့ရာဇ၀င်နှင့် တပါတည်း နောက်ဆုံးခေတ်အထိ လိုက်ပါလာသော *ဘကြီး* ဟူ၍ပင် ရေးသင့်ပေသည်။”
ဒီစာအုပ်ကရော .. ဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးလဲ … ခုလို ဆက်ပြီး ရေးထားပါသေးတယ်။
“ကဗျာရောင် စကားပြေ စာသွားမျိုးလည်း မဟုတ်၊ မှတ်သင့်မှတ်ရာကို မှတ်စုထုတ်ပေး ဘိသကဲ့သို့ ခဲရာ ခက်ဆစ် ပြဿနာ အရပ်ရပ်တို့၏ အကြောင်းများကို ရေးသားထားသော စာမျိုးပင် ဖြစ်သဖြင့် နောင်လာ နောက်သားတို့ ဗဟုဿုတ ရှာမှီးနိုင်ကြစေရန် *နိုင်ငံရေးရာ အဖြာဖြာ*ခေါ်အမည်နှင့် စာအုပ် ထုတ်ဝေ လိုက်ရပေသတည်း”
ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ခေါင်းစဉ်ကြီး ၃၂-ခု ခွဲထားတယ်၊ ခေါင်းစဉ် သေးလေးတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။
ဒီထဲကမှ ခေါင်းစဉ်ကြည့်ရုံနဲ့ သဘောကျမိတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးတွေက …
* လွတ်လပ်ရေးနှင့် လက်လွတ်ရေး
* သာတူညီမျှနှင့် သားတူညီမယား ကောင်းစားရေး
* လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲလော ဗိုလ်လုပွဲလော
* ပညာ နှင့် ပြင်ညာ …
လွတ်လပ်ရေး မရခင်က ရေးသား ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်မို့ ဦးတည်ချက်ကတော့ လွတ်လပ်ရေး အတွက်ပါပဲ။
ဖွဖွ ရွရွလေး ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ သဘောကျလို့ လက်က မချနိုင်အောင် ဖြစ်ရတယ်။ ကိုယ်သဘောကျပြီ ဆိုမှဖြင့် ဝေမျှချင်တဲ့ ဆန္ဒကြောင့် … ကြိုက်နှစ်သက်ရာ အသုံးတည့်မယ်ထင်တဲ့ စာသားလေးတွေ ကောက်နုတ်ပြီး ဘလော့ပေါ် တင်လိုက် ရကြောင်းပါ။
(၁) နိုင်ငံရေးသမား အစစ်တို့၏ထုံး
တိုင်းပြည်နှင့် အမျိုးသားများ အတွက် ဘာတခုမျှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်နိုင်သည်ကို သိလျက်နှင့် ရာထူးလက်ခံသော နိုင်ငံရေးသမားသည် နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်၊ နိုင်ငံရေးကို ဘမ်းပြ၍ ကိုယ်ကျိုး ကိုယ့်စီးပွား ကိုယ့်ပါတီ အကျိုးတို့ကိုသာ ရည်မှန်း၍ နိုင်ငံရေးကို အလွဲသုံးစားသူသာ ဖြစ်ပေသည်။ အစ၌ မိမိအမျိုးသားနှင့် မိမိတိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးထွန်းကားအောင် ရွက်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ယူဆသဖြင့် လက်ခံခဲ့ရာ၊ လုပ်၍ ကြည့်သောအခါ ထင်သည့်အတိုင်း မဟုတ်၊ ဘာတခုမျှ မဖြစ်မြောက်သည်ကို တွေ့ရှိလျှင် နိုင်ငံရေးသမား အစစ်ဖြစ်က ချက်ချင်း နုတ်ထွက်ရပေသည်။
(၂) အပြစ်ရှာနေရန် အခါမဟုတ်
လိုရာခရီးသို့ မှန်းခြေမပေါက်သဖြင့် အချို့က မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးသည် ဇာတ်မျော၍ နေပြီဟုပင် ယူဆကြ၏။ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီး၍ တိုင်းငယ် ပြည်ငယ်အများ လွတ်လပ်ရေးရသော တိုင်းပြည်ကရ၊ မရသေးသော တိုင်းပြည်ကလည်း မရ၊ ရအောင် တိုးတက်၍ ကြိုးစားသဖြင့် ရလုနီးပါး တိုင်းပြည်လည်း ရှိနေရာ၊ မြန်မာပြည်၏ လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲမှာ မြန်စေချင်သလောက် မြန်စွာ မတိုးတက်သဖြင့် မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေး ဇာတ်မျောနေသည် ဟု ယူဆသူတို့အပေါ်တွင် အပြစ်ဆိုရန် မရှိပေ။
သို့ရာတွင် ချက်ခြင်းမရသဖြင့် စိတ်ပျက်၍ နေရန် မဟုတ်၊ လိုရာခရီး မရောက်သဖြင့် မည်သူမည်ဝါ၏ အပြစ် စသဖြင့် အပြစ်ရှာ၍ နေရန်မဟုတ်၊ မရ-ရအောင်သာ စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ ရွက်ဆောင် ကြရန် ရှိပေသည်။
(၃) ရည်ရွယ်ချက်တခြား အလုပ်တခြား
အာဏာကို မိမိလက်တွင်းသို့ ရောက်ရှိအောင် (၀ါ) လွတ်လပ်ရေး ရရှိအောင် မလုပ်ဘဲ မိမိဝါဒ မိမိပါတီ တိုးတက်မှုကိုသာ လုံးပမ်းလျှင် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးလည်း မလွတ်လပ်၊ မိမိနှစ်ခြိုက်သော ၀ါဒလည်း မကြီးပွား၊ အချင်းချင်း စကားများ၍ ညီညွတ်ရေး ပျက်ပြားရုံသာလျှင် ရှိပေသည်။
(၄) အတွင်းရန်- အပြင်ရန်
လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းရာ၌ ထာဝစဉ် တွေ့ရှိရသော ရန်မှာ အပြင်ရန် အတွင်းရန် ဟူ၍ ၂ မျိုး ၂ စား ဖြစ်ပေသည်။
၁- အပြင်ရန်မှာ မြန်မာပြည်သားတို့ လိုလားသော လွတ်လပ်ရေးကို ပြန်မပေးလိုသဖြင့် ပရိယာယ် အမျိုးမျိုးနှင့် သိမ်းပိုက်ထားသူများနှင့် ၄င်းတို့ကို ကူပံ့နေသူများ ဖြစ်ပေသည်။
၂- အတွင်းရန်မှာ အခြားမဟုတ်၊ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများ မညီညွတ်မှု၊ အချင်းချင်း ဂုဏ်ပြိုင်မှု၊ အချင်းချင်း ဖိနှိပ်မှု၊ အချင်းချင်း ဗိုလ်လုမှု၊ အာဏာရရှိမှ စိတ်တိုင်းကျ စီမံနိုင်သော ၀ါဒများကို စွဲလမ်း၍ အချိန်ကုန် အငြင်းအခုံ ဖြစ်နေမှု စသော အချက်တို့ပင် ဖြစ်ပေသည်။
(၅) လွတ်လပ်ရေး - လက်လွတ်ရေး
အုပ်ချုပ်ရေးတွင်လည်း ကာကွယ်ရေး ဥပဒေကို ရေလဲ အမျိုးမျိုးဖြင့် သုံး၍ အရေးတကြီး ဥပဒေများဖြင့် အုပ်ချုပ်ရာ တိုင်းသူ ပြည်သား တို့မှာ အလွန်ပင် စိတ်မချမ်းသာစရာ ဖြစ်၍ နေကြရလေသည်။
ဤသည်ကို ထောက်၍ (အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ပြန်အရောက်တွင်) လွတ်လပ်ရေး မဟုတ်၊ လက်လွတ်ရေး သာလျှင် ရှိကာ ခံစားနေကြရသော အချက်တို့မှာ အစိုးရက (၁)ခေါ်လျှင်သွား၊ (၂)တောင်းလျှင်ပေး၊ (၃) ခိုင်းလျှင်လုပ်၊ (၄) လုပ်လျှင် ခံ ဖြစ်နေပေသည်။
လောလောဆယ်တော့ အဲဒီလောက်ပဲ ရိုက်နိုင်လို့ ဒီလောက်ပဲ ဖတ်ထားနှင့် ကြပါအုံး။
ဒီစာအုပ်ကိုလည်း “နန္ဒမာလိနီ” လို အပိုင်း တွေခွဲပြီး ကောင်းနိုးရာရာ ကောက်နုတ် တင်ပေးရ ကောင်းမလား စဉ်းစားမိပါသေးတယ်။ စိတ်ဝင်စားကြမယ် ဆိုရင်တော့ အချိန်ကုန် ခံရမှာပ … ။
(စာလုံးပေါင်းတွေကို အဲဒီစာအုပ်ထဲက အတိုင်းသာ ရိုက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။)
Posted by မေဓာဝီ at 4:04 AM4comments
ဒီနေ့မနက် အိပ်ရာကနိုးနိုးချင်း အိမ်အနောက် တောင်ထောင့်က လက်ထုတ်ပင်ကြီးပေါ်မှာ ချိုးကလေး ကူနေသံကို ကြားရ၏။
ကူ ကူး …
ကူ ကူး … ဆိုတဲ့ ချိုးကူသံလေး နားထောင်ပြီး ဘာကိုမှန်းမသိ လွမ်းသလို ဆွေးသလို …။
ဒီ ချိုးလည်ပြောက်လေးတွေကို ခြံထဲက သစ်ပင်တွေထက်မှာ မကြာခဏ တွေ့ရတတ်သည်။
တခါတလေလည်း တကောင်တည်း … တခါတလေလည်း ဖိုမ စုံတွဲ။ နှစ်ကောင်ယှဉ်တွဲလို့သာ ဖိုမ စုံတွဲ လို့ ဆိုရသည်၊ တကယ်တမ်းတော့ အထီး အမ မခွဲခြားတတ်။
ချိုးကလေးကူသံ နားထောင်ရင်း …
ဖိုးတောင်သူ့တဲ .. ။
………………………ဆိုသည့် ကဗျာလေးကို သတိတရ ရေရွတ်မိသည်။ တကယ်လည်း လွမ်းအောင် ကူချွဲတတ်သည့် ချိုးကလေး ပါပေ။
ဘယ် ဘယ် ဘယ် ဘယ်ကို ရယ်နှက်
လည်ပင်းအထက် ခေါင်းကိုနှက်လို့ ..
ဘယ် ဘယ် ဘယ် ဘယ်ကိုရယ်ခွဲ
ရှားမီးခဲတွင် ရဲရဲကင်သည် …
ရွှေချိုးဖြူရယ်လေ .. မယ့်လင်သား … ။ ။
ဆိုသည့် ကဗျာ အပိုင်းအစလေးကို အမှတ်ရမိပြန်၏။
ချိုးဖိုကလေးကို ခေါင်းထု ရင်ခွဲပြီး သတ်နေသည့် မြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရသည့် ချိုးမလေး၏ ရင်ထဲ ဘယ်လိုများ ခံစားရမလဲ ဟု ကရုဏာသက် နေမိပြန်သည်။
နံနက်ခင်း၏ တာဝန် ၀တ္တရားများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်နေစဉ်မှာပင် ချိုးကလေးကလည်း ကူလို့ ကောင်းနေတုန်း။
တကူ ကူး ကူ … တကူ ကူး ကူ …
ထူးတင့် သံသာ ..မြူးဝံ့မှန်စွာ
ရွှေချိုးဖြူရယ် ကူတယ်လေး … ကူ ကူ ကူ လို့နေ …
ဆိုသည့် သီချင်းကလည်း ခေါင်းထဲ ရောက်လာပြန်သည်။
ဦးတင်မောင်နှင့် ကြည်ကြည်ဌေး သရုပ်ဆောင်သည့် ဇာတ်ကား ဟုထင်ပါသည်။ နောက် သိန်းဇော်နှင့် မေလွင် လည်း ပါသေးသည်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ချိုးဖြူကလေးတွေနှင့် အတူ သီဆိုသော တကူကူးကူ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ဝင်တေး ကလေးကို ငယ်ငယ်ထဲက သဘောကျ နှစ်သက်မိခဲ့သည်။ ချိုးကူသံကလေးများ ကြားရရင်ဖြင့် ဒီသီချင်းလေးကို (စာသားမှန်မမှန်မသိ)ပျော်ပျော်ပါးပါး နှုတ်က ရွတ်ဆိုမိနေကျ။
ချိုးငှက် ဆိုသည်က ငြိမ်းချမ်းရေး၏ သင်္ကေတ။
သူ့ ကူသံကလေးကလည်း သာတောင့်သာယာ လွမ်းစရာ။ ချိုးကူသံကလေး နားထောင်မိသည့် အခိုက်အတန့်ကလေးမှာပင် လွမ်းမိဆွေးမိ၊ ကရုဏာသက်မိ၊ နှစ်သက် ကြည်နူး ပြုံးပျော်မိ … ရသမျိုးစုံ တပြိုင်တည်း ခံစား လိုက်ရ၏။
ဆောင်းအနှောင်း နွေအပြောင်း နံနက်ခင်းက အေးအေးညင်းညင်း ရှိလှသည်။
ဒီရာသီနှင့် ဒီနံနက်ခင်းနှင့် ဒီချိုးကူသံကလေးက လိုက်လည်း လိုက်ဖက်ပါဘိ။
Posted by မေဓာဝီ at 5:46 AM2comments
“ကိစ္စများမြောင် လူတို့ဘောင်” ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း ကျမမိတ်ဆွေကြီး ကိုပြူးကျယ် တယောက် အလုပ်တွေ များနေတယ် ထင်ပါရဲ့။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ … အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေကြောင်း ဦးဆုံး ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါရဲ့ရှင်။
ဒီတပတ်တော့ မပြီးပြတ်သေးတဲ့ လေးချိုးအခန်း ကိုပဲ ဆက်ပြောကြပါဦးစို့ နော်။
လေးဆစ်အပြီးမှာ လေးချိုးလတ် ရေးနည်း နဲ့ နမူနာ လေးချိုးလတ်တွေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
လေးချိုးလတ်ဟာ လေးဆစ်လိုပဲ အချိုး ၄-ခု ရှိရပါတယ်၊ အချိုး ၄-ခုရဲ့ ပထမချိုးမှာ ၃-ပိုဒ် (သို့မဟုတ်) ၄-ပိုဒ် ထားကြပြီး ကျန် ၃ ချိုးတို့မှာတော့ အနည်းဆုံး ၃-ပိုဒ်မှ ၇-ပိုဒ် ထိ ထားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အက္ခရာ လုံးရေအားဖြင့်တော့ ပထမ နဲ့ တတိယအချိုးတို့ရဲ့ အပိုဒ်တိုင်းမှာ ၆-လုံး စီထားရပါမယ်။
ဒုတိယချိုးရဲ့ အစပိုဒ်မှာ ၃-လုံး (သို့) ၆-လုံး စီ ထားရပြီး အဆုံးပိုဒ်မှာတော့ ၄-လုံးသာ ထားရပါမယ်။
စတုတ္ထချိုးရဲ့ အစပိုဒ်မှာ ၃-လုံး (သို့) ၄-လုံး စီ ထားရပြီး အလယ်ပိုဒ်တို့မှာ ၆-လုံး စီထားကာ အဆုံးပိုဒ်မှာတော့ ၄-လုံးသာ ထားရပါမယ်။
လေးချိုးလတ်ရေးနည်း နမူနာပြ ဆောင်ပုဒ်ကလေးကို ကြည့်ရအောင်။
ကုံးသီကာ ရှေးပျိုးတတ် (စေဘို့)၊
ထုံးမှီစရာ ရှေးရိုးစပ် (မယ်ပ)၊
(အိုကွယ်)လေးချိုးလတ် (ရယ်တဲ့) ဤသည့်စာ။
ပြရိုးနော် တိပဒါ (ပ)၊
ဒုတိယာ-တ, စတု (မှာလ)၊
စု-လိ-ပါ-သ တခု (ပါဘဲ)၊
ပိုဒ်စု (ကို) အမြင်သာ (ဘို့)၊
သင်္ချာကို နံသင့်ရေး (တယ်ကွယ်)၊
တွေး … ကြ သေချာ။… ။
အက္ခရာ လုံးရေရ (ကိုလ)၊
ဆက်ကဗျာ ကုံးဖွေလို့ပြ (ပြန်တော့)၊
သုံးနေကျ (မှာလ) ပ-တ-မှာ … ၊
ဆခရာ (သာပ) အပိုဒ်တိုင်း။
ရှုဆဖွယ် ခြောက်ပင်ကုံး (ပါလို့)၊
နောက်ဆုံး (တွင်)လေးခရာ ပ၊
ဒွေးစမှာ -တိ-ဆ-ကုံး (ပါတော့)၊
စတုတ္ထာ-စပိုဒ် လုံး (မှာလ)၊
လေး-သုံးနှင့် စိုင်း (ပါလို့) (ကွယ်တို့ရယ် …)၊
ရေးထုံးချင့်နှိုင်း …။ … ။
ဒါကို ဒီတိုင်းဖတ်ရင် ဘာကြီးတွေ ရေးထားမှန်း ရုတ်တရက်သိမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ပြန်ရှင်းပါဦးမယ်။
* ပ-အချိုးမှာလ၊ ပြရိုးနော် တိပဒါပ * ဆိုတာ က ပထမချိုးမှာ ၃-ပိုဒ် ထားရမယ်လို့ ဆိုတာပါ။ တခါတရံ တွန့်ပိုဒ် များနဲ့ တကွ ၄-၅ ပိုဒ်လဲ ထားနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါသေးတယ်။
* ဒုတိယာ တ-စတု မှာလ၊ စု-လိ-ပါ-သ တခုပါဘဲ * ဆိုတာတော့ စု-လိ-ပါ-သ ဆိုတဲ့ စာကို နံသင့် ဂဏန်း ပြောင်းလိုက်ရင် ၃-၄-၅-၆ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထ ချိုးတွေမှာ ၃-ပိုဒ် (သို့) ၄-ပိုဒ် (သို့) ၅ ပိုဒ် (သို့) ၆ ပိုဒ် ထားလို့ရတယ်လို့ ဆိုထားတာပါ။
* သုံးနေကျမှာလ ပ-တမှာ၊ ဆ-ခရာ သာပ အပိုဒ်တိုင်း * ပထမချိုးနဲ့ တတိယချိုးတို့ရဲ့ အပိုဒ်တိုင်းမှာ အက္ခရာ ၆-လုံး စီသာ ထားရမယ်တဲ့။
* ဒု-စ လယ်၊ ရှုဆဖွယ် ခြောက်ပင် ကုံးပါလို့ * ဒုတိယ၊ စတုတ္ထ အချိုးတို့ရဲ့ အလယ်ပိုဒ် တွေမှာ ၆ လုံးပဲ ထားရမယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
*နောက်ဆုံးတွင် လေး-ခရာပ * ဒုတိယ၊ စတုတ္ထ ချိုးတို့ရဲ့ နောက်ဆုံးပိုဒ်မှာ အက္ခရာ ၄-လုံး ထားရပါမယ်။
*ဒွေးစမှာ တိ-ဆ ကုံးပါတော့ * ဒုတိယချိုးရဲ့ အစပိုဒ်မှာ ၃-လုံး (သို့) ၆-လုံး တခုခုသာ ထားရပါမယ်။
* စတုတ္ထာ-စပိုဒ်လုံးမှာလ၊ လေးသုံးနှင့် စိုင်း * စတုတ္ထချိုးရဲ့ အစပိုဒ်မှာ ၃-လုံး (သို့) ၄-လုံး တခုခုသာ ထားရပါမယ်။
လက်သည်းကွင်း ခတ်ထားတဲ့ အက္ခရာတွေကတော့ အက္ခရာလုံးရေနဲ့ ကာရန်မှ လွတ်တဲ့ ၀ိဘတ်အက္ခရာ၊ ပဒါလင်္ကာရ အက္ခရာတို့ပါပဲ။ သူတို့ကို ထည့်ရေတွက်စရာ မလိုပါဘူး။
ရှင်းတာနဲ့ ပိုများရှုပ်သွားသလားတော့မသိဘူး။ ထပ်လည်း မရှင်းတတ်တော့တဲ့ အတူတူ နမူနာ လေးချိုးတွေသာ ဖတ်ကြည့်ကြပါတော့။
မင်း သာဓုပေး။ … ။
လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်ရေး “သံဝေဂ လေးဆစ်”
ရှင်းမဲ့ ကြံဆဲ ။ … ။
ဆရာကြော့ရေး “တောသူဖွဲ့ လေးဆစ်”
ကလျာသက် (ရယ်တဲ့) လှမျက်မှန်။
မင်းကတော် ခေါ် စလောက်ပါဘဲ့၊
တောက်ခေါက်မိ အော် … တို့ကံငယ်၊
(ခင်လေးရယ်)ပြောမမေ့နိုင်ဘူး။ … ။
ဒါကတော့ လေးချိုးလတ် နမူနာလေးတွေပါ။ နောက်တပတ်ကျမှပဲ လေးချိုးကြီး ဆက်ကြဦးစို့ရဲ့ ..နော်။
ဒီ နမူနာ သံဝေဂ လေးဆစ်ကလေးတွေ ဖတ်ပြီး တောထွက်ချင်စိတ်များ ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဖော်ပြမိသူ ကျမ ကုသိုလ်တွေ အများကြီး ရမလားလို့ တွေးနေမိပါတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ ဆရာကြော့ရဲ့ တောသူဖွဲ့ လေးဆစ်ကလေးကို အပိတ် ဖော်ပြလိုက်ရတာပါ၊ စိတ်ခိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ နုသားတော် ၀ါဝါညက်ဟာလည်း ရုပ်ခန္ဓာ အကောင်ပုပ် ပါဘဲ လို့ ဆင်ခြင်မိမယ် ထင်ပါရဲ့။
ကိုပြူးကျယ်နှင့်တကွ မြန်မာစာ မြတ်နိုးသူ အပေါင်း ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေ …. ရှင်။
Posted by မေဓာဝီ at 6:15 AM2comments
Posted by မေဓာဝီ at 6:10 AM 1 comments
ငယ်ရွယ်စဉ်အခါ စာရေး သင်တော့ သစ်သားဘောင် ကွပ်ထားသည့် ကျောက်သင်ပုန်းလေး ပေါ်မှာ ကျောက်တံ ချောင်းကလေးဖြင့် ၀လုံးကလေးတွေ စပြီး ရေးခဲ့ဖူးသည်။ ကျောက်တံကို ဘယ်လိုကိုင်၊ ၀လုံးကို ဘယ်လိုဆွဲ … စသည်ဖြင့် ကံ့ကူလက်လှည့် သင်ကြားပေးသော အမေ့စကားတွေ ယခုတိုင် အမှတ်ရနေမိဆဲ။ ရေးဆွဲလိုက်သည့် ၀လုံးကလေးတွေထဲမှာ မညီမညာ မလှမပ မသေမသပ်တွေ ပါလာခဲ့ရင် လက်ဖြင့် အသာလေးဖျက်ပြီး ပြန်ပြင်ရေးလိုက်ရုံပင်။ ကျောက်သင်ပုန်းထက်က ၀လုံးလေးတွေ မှားလျှင် ပြင်ရတာ လွယ်ကူလွန်းလှပါသည်။
ဒီတုန်းက အရွယ်ကလည်း ငယ်သေးသည်ကိုး။
နောက်တော့ သူငယ်တန်း တက်ရတဲ့အရွယ် … ။
လေးကြောင်းမျဉ်း စာအုပ်လေးထဲမှာ အလယ်မျဉ်းပြာလေး နှစ်ကြောင်းထဲ ၀င်အောင် ၀လုံးလေးတွေ၊ ကကြီး ခခွေး လေးတွေ ခဲတံကလေး တချောင်းနဲ့ စီစီညီညီ ရေးရပြန်ပါသည်။ ဒီအခါမှာလည်း ကိုယ်ရေးတဲ့ စာလုံး တလုံးတလေ မှားသွားရင် ခဲတံနောက်မြီးက ခဲဖျက်ကလေးနဲ့ ဖျက်ပြီး ပြင်ရေးလို့ရသည်။ ခဲတံ နောက်မြီးက ခဲဖျက်လေးတွေ ပါးပြီး ကုန်သွားလျှင်လည်း ကိစ္စမရှိ၊ ဖျက်လို့ကောင်းသည့် ခဲဖျက်တုံးလေးတွေ ၀ယ်၍ ရနေသားပဲ။ ခဲဖျက်လေးတွေ ရှိသမျှ … စာရေးတဲ့အခါ မှားမှာ စိုးရိမ်စရာမရှိ။ မှားလျှင် မှားပါစေ .. ဖျက်ပြီး ပြန်ပြင်ရေး၍ ရနေသည် မဟုတ်လား။
သို့ပေမဲ့ …ကျောက်သင်ပုန်းမှာ ရေးခဲ့စဉ်ကလို လက်ဖြင့် အသာဖျက်ကာ ပြင်ဆင်ခွင့်တော့မရှိ။ ပြင်ဆင်လို့လည်း မရ၊ အမှားတခုကို ပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက် “ခဲဖျက်” ဆိုသည့် အကူပစ္စည်း တခုလိုအပ်နေပြီ … ။ အရင်လိုမျိုး ၀လုံးကလေး ၀ိုင်းဝိုင်းရေးသည့် အမေ့ကျောင်း တက်ခဲ့စဉ် အရွယ်လည်း မဟုတ်တော့ပြီလေ။
ဒီနောက် … ပဉ္စမတန်း စတက်ရတဲ့ အခါမှာတော့ ဖောင်တိန် ဘောပန် စတင် အသုံးပြုကြရသည်။ ဒီအခါမှာတော့ အရင်လို ခဲဖျက်ကလေးဖြင့် အမှားများကို အလွယ်တကူ ဖျက်၍ မရတော့။ စာရွက်ပေါ် မှင်ဖြင့်ရေးထားသည့် စာလုံးများ မှားယွင်းသွားခဲ့ပါက ခြစ်ပစ်လိုက်ရသည်၊ သို့မဟုတ်လည်း မှင်ဖျက်သည့် ခဲဖျက် အကြမ်းစားဖြင့် ဖျက်ရသည်။ ဒါပေမဲ့ ဒီ ဖျက်ရာ ခြစ်ရာကြီးက စာရွက်ဖြူဖြူထက်မှာ မလှမပ ကျန်နေခဲ့တတ်ပါသည်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အမှားတွေကို ဖျက်ပစ်ရန်မလို ခြစ်ပစ်ရန်မလိုဘဲ ဖုံးအုပ်နိုင်စွမ်းရှိသော ဆေးဖြူဖြူ ကလေးတွေ ပေါ်ပေါက်လာပေသည်။ Correction Pen ကလေးထဲမှ ဖြူဖြူဆေးရည်ကလေး ညှစ်ထုတ်ပြီး မှားခဲ့သည့် အမှားများကို ဖုံးလွှမ်းနိုင် သည့်နောက် correction pen အားကိုးဖြင့် ငယ်ငယ်ကထက် များပြားသော အမှားများကို ပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့လေ၏။
ဒီလိုနှင့် အသက်တွေ တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ အတန်းတွေလည်း တတန်းပြီးတတန်း တက်ခဲ့ရပြီး ဘ၀မှာ အမှားအယွင်း တွေလည်း တခုပြီးတခု ကြုံဆုံခဲ့ရပါသည်။
အမေ့ကျောင်းတက်စဉ် အရွယ်က …
သူငယ်တန်းတက်စဉ် အခါက …
ဖောင်တိန် ဘောပန် စကိုင်စဉ် အချိန်က …
အမှားတွေ ပြုခဲ့သမျှ မသိမသာတမျိုး သိသိသာသာတမျိုး ဖျက်ကာ ခြစ်ကာ ဖုံးကာ ၀ှက်ကာ ပြင်ဆင် ခဲ့ရသည်။
စာအုပ် စာရွက်ထဲမှာ ခဲတံဘောပန် ဖြင့် ရေးသားခြင်းထက် ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြု၍သာ အရေးများနေသော ယခုအချိန်မှာတော့ အမှားတွေကို အရင်ထက် ပိုပြီး ကျူးလွန်မိလာပြန်သည်။ ကွန်ပျူတာထဲမှာက မှားလျှင် ပြင်၍ လွယ်ကူသည် မဟုတ်လား။ ပြင်ထားမှန်းလည်း မည်သူမှ မသိ၊ အရင်လို ဖျက်၍ တမျိုး ဖုံး၍တခါ ပြုပြင်စရာ မလိုတော့ … ။ ဒါကြောင့်လည်း အမှားတွေ ပိုမို ပြုလုပ်မိပြီး မှားမှန်းလည်း ကိုယ်တိုင် သတိမပြုမိ ခဲ့သည်ကများ၏။ မှားခဲ့သည် ဆိုတာကိုပင် မေ့လျော့လို့ နေမိပြန်သည်။
ဘ၀သည် အမှားတွေ အထပ်ထပ်နှင့် ညစ်သည်ထက် ညစ်လာပြီးသည့်နောက် ထပ်မှားပြန်တော့လည်း သိပ်မထူးခြားသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှည့်စားမိနေ၏။
“လူဆိုတာ ခဏခဏ မှားတတ်တယ် … မှားတဲ့အမှား အတွက် ပြန်လည် ပြင်ဆင်ခွင့်လည်း ရှိတယ်၊ ဒါကြောင့် ခဲတံလေးတွေရဲ့ နောက်မှာ ခဲဖျက်တွေ ထည့်ထားတာ …”
ဟု သူငယ်ချင်းတယောက်က ပြောဖူးသည်။ correction pen, correction tape စတဲ့ တီထွင်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာရ ခြင်းကလည်း လူတွေ အမှားများတတ်ခြင်းကို ဖော်ပြနေသကဲ့သို့ပင်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ … မှားခဲ့သည့် အမှားတွေကို မှားမှန်းသိဖို့နှင့် ထိုအမှားမျိုးတွေ ထပ်မမှားဖို့ … ထိုအမှားများအတွက် အချိန်မီ ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်ကြဖို့က အရေးကြီးသည် မဟုတ်ပါလော … ။
Posted by မေဓာဝီ at 6:23 AM5comments
ဒီခေါင်းစဉ်မြင်လိုက်လို့ …မေဓာဝီတယောက် ဟိုနေ့က သူခိုးခိုးခံရပြီး ဒီနေ့ကျတော့ စိတ်ဖောက်ပြန် သွားရှာပြီလို့ မထင်လိုက်ကြပါနဲ့။ အဲဒါက ၀တ္ထုခေါင်းစဉ် လေးတခုပါ။
တကယ်တမ်း စိတ်က မဖောက်ပြန်ပေမဲ့ … ခပ်နောက်နောက်တော့ ဖြစ်နေလေရဲ့၊ သူခိုးနဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ ထားပါတော့ … အဲဒီ စိတ်ဖောက်ပြန်ခြင်း ဆိုတာက စာမျက်နှာပေါ်မှာ ပထမဦးဆုံး ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ ကျမရဲ့ ၀တ္ထုတိုလေး တပုဒ်ပါ။
၁၉၈၉ နိုဝင်ဘာလထုတ် ပန်းဝေသီ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ ပန်းနုသစ်သီ ကဏ္ဍလေးမှာ ဖော်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။
မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကို ပထမဆုံး ပို့လိုက်တဲ့ ၀တ္ထုကလေး ရွေးခံရတယ်ဆိုတော့ အတိုင်းမသိ ၀မ်းမြောက်ခြင်းတွေနဲ့ပေါ့။ ရွေးလို့ရွေးမှန်းလည်း မသိပါဘူး။ စာအုပ်ဆိုင်က ငှားဖတ်မှ ပါလာမှန်းသိတာ။ ၀မ်းသာလွန်းလို့ အိမ်ပေါ်ထပ် လှေခါးကတောင် ပြုတ်ကျပြီး ခြေထောက်မျက် သွားတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရသေးတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အတွေးငယ်ငယ်နဲ့ ရေးထားတဲ့ အဲဒီဝတ္ထုလေးကို ဒီနေ့မှ သတိတရ ဖြစ်နေမိတယ်။ အခုတော့ဖြင့် အဲဒီလို အတွေးမျိုးတွေလည်း မတွေးမိ အဲဒီလို အရေးမျိုးတွေလည်း မရေးမိတော့ပါဘူး။ စာအုပ်ကတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီမို့ အထိမ်းအသိမ်း မတတ်တဲ့ ကျမလက်ထဲမှာ ဘယ်ရှိပါတော့မလဲ။ ကြွားချင်တာနဲ့ ဟိုလူလာရင် ပြလိုက်ရ .. ဒီလူလာရင် ပြလိုက်ရနဲ့ နောက်ဆုံး စာအုပ်က ဘယ်သူ့လက်ထဲ ရောက်သွားမှန်းကို မသိဘဲ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ ပါရောလား။
အခုခေတ်လို စကန်တင်လို့မရ၊ မိတ္တူ ဆွဲထားဖို့လည်း နားမလည် ဆိုတော့ ကိုယ့်စာလေးတွေ တစုတစည်းထဲ ပြန်ထုတ် ချင်ရင်တောင် ကိုယ့်စာမူတွေ ဘယ်မှာ ပြန်ရှာရပါ့မလဲ မသိ။ လက်ရေးစာမူလေးများ ကျန်လိုကျန်ငြား ပြန်ရှာကြည့်တာလည်း မတွေ့တော့ပါဘူး။
အဲဒီတုန်းက ဒီဝတ္ထုအတွက် စာမူခ ၁၅၀ ကျပ် ကြီးများတောင် ရပါတယ်။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်က (ထင်တာပဲ) ပန်းဝေသီ တိုက်ကို လေးဘီး အငှားကားလေးနဲ့ စာမူခသွားထုတ်ပြီး အပြန်မှာ သူငယ်ချင်းတွေကို ကြက်လျှာစွန်းမှာ ဒန်ပေါက် ကျွေးနိုင်တဲ့အပြင် အိမ်အတွက်လည်း ပန်းသီးတွေလား ၀ယ်ခဲ့နိုင်သေးတယ်။ အဲဒီခေတ်က ၁၅၀ ဆို တော်တော်သုံးရသားပဲ လို့ လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေး တွေးနေမိပါသေးရဲ့။
အဲဒီဝတ္ထု အကြောင်းအရာလေးကို မှတ်မိသလောက် ပြန်ပြောရရင်တော့ ဒီလိုပါ။
အိမ်ထောင်ရှိတဲ့ ယောက်ျား တယောက်ရဲ့ အတွေးကလေးကို ရေးထားတာပါ။ သူ့မှာ အိမ်သူသက်ထား ဇနီးမယား ရှိနေပေမဲ့လို့ တချိန်က ချစ်သူကို သတိရနေမိတယ်။
အိမ်သူရဲ့ လက်ကြမ်းကြမ်းကြီးတွေနဲ့ ချစ်သူရဲ့သွယ်ပျောင်းနူးညံ့တဲ့ လက်ကလေးတွေ …
အိမ်သူရဲ့ အုန်းဆီဝနေတဲ့ ဆံပင်တွေနဲ့ ချစ်သူရဲ့ ပိုးသားလို ပျော့ပျောင်း ပျံ့မွှေးတဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေ …
အိမ်သူရဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တုံးတိတိ တဲ့တိုးပြောစကားနဲ့ ချစ်သူရဲ့ ချွဲနွဲ့တဲ့ တီတီတာတာ စကားသံလေးတွေ …
မီးဖိုချောင်ထဲ ချက်ပြုတ်ရလို့ ဟင်းနံ့ ညှော်နံ့တွေ ရနေတဲ့ အိမ်သူရဲ့ ကိုယ်ရနံ့ နဲ့ အမြဲအစဉ် မွှေးပျံသင်းထုံ နေတဲ့ ချစ်သူရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့လေးတွေ ..
ဒါတွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး သူဟာ ချစ်သူကို အမှတ်ရနေမိတာပါ။
အဲဒီလို ချစ်သူလေးနဲ့ အခြေအနေခြင်း အယူအဆခြင်း မတူတဲ့အတွက် လမ်းခွဲခဲ့ပြီး ….နောက် … ။
တကယ်တမ်း လက်တွေ့မှာတော့ …
ခဏခဏ စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ ချစ်သူနဲ့ သူ့လိုအပ်သမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ အိမ်သူ …
ကဗျာတွေ စာတွေရေးတာကို အထင်မကြီးတဲ့ ချစ်သူနဲ့ သူရေးသမျှစာကို အထင်တကြီး တလေးတစားရှိတဲ့ အိမ်သူ …
အမြဲတမ်း ဥရောပနံ့သာကိုသာ သုံးစွဲတဲ့ ချစ်သူနဲ့ သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားလေးကိုသာ လိမ်းခြယ်တတ်တဲ့ အိမ်သူ …
ချစ်သူနဲ့အတူ ဈေးကြီးပေး စားခဲ့ရတဲ့ ပကာသန ထမင်းဝိုင်းတွေနဲ့ ဘဲဥချဉ်ရည် ငပိရည် တို့စရာ ဟင်းပွဲ လေးတွေ နဘေးမှာ ယပ်တဖျပ်ဖျပ် ခပ်ပေးနေရှာတဲ့ အိမ်သူရဲ့ ထမင်းပွဲကလေး …
ဒါတွေကို မလဲနိုင်ဘူး ဆိုတာ သူ သဘောပေါက် ခဲ့ရပါတယ်။
သူဟာ ချစ်သူကို သတိရနေမိတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း အိမ်သူဆီမှာ ဖွင့်ဟ ၀န်ခံပြောပြလိုက်တော့ … အိမ်သူက ပြုံးပြီး ခုလို ပြန်ပြောတယ်။
ဒါဟာ … လူက ဖောက်ပြန်တာမှ မဟုတ်ဘဲ … သတိရတယ်ဆိုတာ စိတ်ထဲက ရတာပဲ … ဒါကြောင့် စိတ်နဲ့ ဖောက်ပြန်တာ ..ဆိုတော့ … ကျမ ခွင့်လွှတ်ပါတယ် … တဲ့ … ။
သူ တကယ်ပဲ စိတ်ဖောက်ပြန်နေပြီလား …. လို့ သူ့စိတ်ကူးထဲမှာ သူ မေးရင်း ၀တ္ထုကို အဆုံးသတ်ထားတာပါ။
ကျမတို့ဟာ တခါတရံမှာ သိလျက်နဲ့ ဖြစ်စေ မသိလို့ ဖြစ်စေ လူ့ကျင့်ဝတ်တွေ ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန် မိတတ်ကြပါတယ်။ လူပီသအောင် စောင့်ထိန်းအပ်တဲ့ ငါးရပ်သောသီလ ကို တည်မြဲအောင် မစောင့်ထိန်းနိုင်ကြဘဲ အနည်းဆုံးတော့ စိတ်ထဲက ဖောက်ပြန် မိတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်နဲ့တင် ဘရိတ်အုပ်ပြီး လက်တွေ့ မကျူးလွန်မိလေအောင် ဆင်ခြင်တုံတရား ရှိဖို့က အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စိတ်နဲ့ ဖောက်ပြန်မိရင်လည်း ဒီဝတ္ထုထဲကသူလို မိမိအမှားကို ၀န်ခံတတ်ကြမယ်ဆိုရင် ကောင်းမှာပါပဲ … ။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် စိတ်နဲ့ ဖောက်ပြန်မိရာက မထိမ်းနိုင် မသိမ်းနိုင်ဘဲ ….ရှေ့ဆက်တိုးရင်း လက်တွေ့ ဖောက်ပြန်မိ ကြမယ်ဆိုရင်တော့ … ပိုအပြစ်ကြီးမယ်၊ ပို ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ် မဟုတ်လား။
ဒါကြောင့် စိတ်ဖောက်ပြန်ချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖောက်ပြန်မှန်းသိပြီး သတိဆိုတဲ့ ချွန်းနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ဆင်ရိုင်းကို ချွန်းအုပ် ထိမ်းသိမ်းပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် …
လောကကြီးမှာ ဖောက်ပြန်မှုတွေ ကင်းဝေးသွားကြမယ် ထင်တာပါပဲ။
ဖောက်ပြန်ခြင်းမှ ကင်းဝေးရပါလို၏ … ။
Posted by မေဓာဝီ at 3:00 AM2comments
Posted by မေဓာဝီ at 3:25 AM2comments
Posted by မေဓာဝီ at 4:25 AM 1 comments
Posted by မေဓာဝီ at 4:46 AM4comments
ငယ်စဉ်က ဒီလိုနေ့ဆိုလျှင် အိမ်ရှေ့ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ လူစုလူဝေး စီတန်းလျက်၊ အလံတွေကိုင်ဆောင် လွှင့်ထူလျက်၊ တူညီဝတ်စုံများ ၀တ်ဆင်လျက် ညီညီညာညာ လမ်းလျှောက်ရင်း “ဒို့အရေး … ဒို့အရေး” ဟု ကြွေးကြော်သွားကြသည့် မြင်ကွင်းကို နှစ်စဉ် မြင်ရလေ့ရှိသည်။
ဒီအခါဆို လူကြီးတွေက ဘိလပ်ရည်တွေ ဖျော်ထည့်ထားသော ဒန်အိုးကြီးများကို အိမ်ရှေ့တွင်ချကာ ချီတက် လာကြသူများ အမောပြေစေရန် အလို့ငှာ တိုက်ကျွေးကြ၏။ သူတို့လို ကလေးတွေကတော့ ဘိလပ်ရည် ခွက်ကလေးတွေ လိုက်လံ ကမ်းပေး၊ သောက်ပြီးသား ခွက်ကလေးတွေ ပြန်ယူ၊ လူစုစုကြား အပြေးအလွှား လှုပ်ရှားရတာကိုပင် ပျော်နေခဲ့ကြသည်။
“ဒို့အရေးတွေ လာပြီဟေ့” လို့ တယောက်ယောက်က စပြောလိုက်ပြီဆိုလျှင် အိမ်ရှေ့ထွက်ချင်ပြီ။ ဒို့အရေးတွေကို တနေကုန် မမောနိုင်အောင် ကြည့်ပြီး အားလုံးပြီးသွားချိန် ဆိုရင်တော့ မျက်စိမှိတ်လည်း မျက်စိထဲမှာ ဒို့အရေးတွေ၊ ရေသောက်လည်း ရေခွက်ထဲမှာ ဒို့အရေးတွေ၊ အိပ်ရာဝင်ချိန်ထိပင် ခြင်ထောင် ခေါင်မိုးမှာ ဒို့အရေးတွေ မြင်ယောင်လို့ နေ၏။
သည်တုန်းကတော့ “ဒို့အရေး .. ဒို့အရေး” ဟု အော်ကြတာဟာ ဘာမှန်းလဲ မသိခဲ့။ သိရန်လည်း မစဉ်းစား။ ဒို့အရေးရဲ့ အရှေ့က ဘာတွေ တိုင်ပေးနေတယ် ဆိုတာလဲ နားမလည်။
သူသိတာက ဒို့အရေး လာတတ်သည့် ပြည်ထောင်စုနေ့ ဆိုလျှင် ကျောင်းပိတ်မည်။ ပြည်ထောင်စု အလံကို ဟိုမှ သည်မှ သယ်ဆောင်ရင်း ကျိုက္ကဆံကွင်းမှာ ရပ်နားမည်။ ကျိုက္ကဆံကွင်းသို့ ချီတက်လာသည့် ဒို့အရေးတွေကို မမောတမ်း ကြည့်ကြမည်။ ညဘက်မှာ ပြည်ထောင်စုပွဲ ကျင်းပရာ ကျိုက္ကဆံကွင်းကို သွားကြမည်။ ပွဲကြည့်မည်။ အရောင်း ပြခန်းတွေ ကြည့်မည်။ ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်မည်။ ဒီလောက်ပဲ။
အိမ်ရှေ့မှ ဖြတ်လျှောက် ချီတက် ကြွေးကြော် သွားကြသော ဒို့အရေးတွေက ဘာတွေလဲ … သူမသိ။ ဘာအတွက် အော် နေတာလဲ သူ နားမလည်။
ဒီလိုနှင့် တဖြည်းဖြည်း ကြီးပြင်းလာပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီလို ဒို့အရေးမျိုးတွေ တစတစ ပျောက်ကွယ် သွားသည်။ ပျောက်ကွယ် သွားရာမှ ပြန်ပေါ်လာပြန်တော့ ပုံစံတမျိုး ဖြစ်လို့နေ၏။
ဒီအချိန်မှာတော့ သူ သိတတ် နားလည်တတ်သည့် အရွယ်သို့ပင် ရောက်လို့နေပြီ။
လူစုလူဝေး စီတန်း ချီတက် လျက်ပါပဲ။
“ဒို့အရေး … ဒို့အရေး” လို့လည်း ကြွေးကြော်လျက်ပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ နှုတ်ဖျားက အသံတွေမဟုတ်။ ရင်ထဲမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အားမာန်အပြည့် ဟစ်ကြွေးသံများ။ ချီတက်လာကြသူ အားလုံး၏ မျက်လုံးများက မျှော်လင့်ချက် တို့ဖြင့် တလက်လက် တောက်ပလျက်။ ရဲစိတ် ရဲမာန် အပြည့်။ ဖမ်းမှာ မကြောက်၊ သေမှာ မကြောက်။
ဘေးမှ ကြည့်နေသူများပင် ကြက်သီးမွေးညင်း ထကာ စိတ်ဓာတ်များ တက်ကြွ လာကြသည်။ ဒို့အရေး … ဒို့အရေး ဟု … ရင်ထဲကအသံများ နှုတ်ဖျားမှ ဖွင့်ဟလာကြသည်။ လက်သီး လက်မောင်း တန်းလာကြသည်။
ဒီ ဒို့အရေးတွေကိုမူ … သူ၏ မျက်စိထဲတွင်မက နှလုံးသားထဲမှပင် ဒီတသက် ထွက်တော့မည် မဟုတ်။
သူ ငယ်ငယ်က ကြုံခဲ့ရသည့် ဒို့အရေးက အော်ခိုင်းလို့ အော်ကြရသည့် ဒို့အရေး …။ နောက်တချိန် ထပ်မံ ကြုံခဲ့ရသည့် ဒို့အရေးကတော့ ပြည်သူအားလုံး ရင်ထဲမှ မခံမရပ်နိုင်သည့်အဆုံး ထွက်ပေါ်လာသော ဒို့အရေး …။
စကားလုံးချင်း တူသော်ငြား … အဓိပ္ပါယ်ကား ကွာခြားလွန်းလှသည်။
ဒို့အရေး … ဆိုသော သုံးလုံးတည်းသော ဝေါဟာရလေး သည်ပင်လျှင် ခံယူချက် မတူညီသော လူတွေ၏ နှုတ်ဖျားမှာ ကောင်းတခါ ဆိုးတလှည့် ကြုံခဲ့ရပေ၏။
တကယ်တမ်း … ဒို့အရေး ဟူသည် …
တဦးတယောက်၊ တဖွဲ့၊ တအုပ်စု၏ အရေးပေလား။
တနိုင်ငံလုံး၊ တမျိုးသားလုံး၊ ပြည်ထောင်စုကြီး တခုလုံး၏ အရေးပေလား။
“ဒို့အရေး” သည် … ငါ့အရေး မဟုတ်၊ မင်းအရေးမဟုတ်၊ သူ့အရေးမဟုတ်၊ ငါတို့အားလုံး၏ အရေးပင်ဖြစ်သည်။
ငါနှင့် မဆိုင်၊ မင်းနှင့်မဆိုင်၊ သူနှင့်မဆိုင်ဟု ပြောလို့မရ၊ ငါတို့အားလုံးနှင့် ဆိုင်သည်။
ငါတို့ ဘိုးဘွား မိဘတွေ သည် … ဒီမြေပေါ်မှာ မွေး၊ ဒီမြေပေါ်မှာ ကြီးပြင်းရှင်သန်ခဲ့ကြသည်။
ငါတို့သည်လည်း … ဒီမြေပေါ်မှာပင် မွေး၍ ဒီမြေပေါ်မှာပင် ကြီးပြင်း ရှင်သန်ခဲ့ကြသည်။
ငါတို့၏ မျိုးဆက်များသည်လည်း ဒီမြေပေါ်မှာ မွေးပြီး ဒီမြေပေါ်မှာပင် ကြီးပြင်း ရှင်သန် ကြဦးမည်။
ဒီမြေသည် ငါတို့အားလုံး၏ မြေဖြစ်သည်။
ငါတို့ ရှင်သန် ကြီးပြင်းခဲ့ရာ မြေကို ငါတို့ ပြန်လည် ကျေးဇူးပြုကြရမည်။
ငါတို့အားလုံး တိုးတက်မှ ငါတို့မြေလည်း စည်ပင်ဝပြောမည်။
ငါတို့အားလုံး ညီညွတ်မှ ငါတို့မြေလည်း သာယာလှပမည်။
ငါတို့မြေ သာယာဝပြောဖို့ ငါတို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိသည်။
ငါတို့ စဉ်းစားကြပါစို့ … ။
ငါတို့၏ မျိုးဆက်များသည် …. ငါတို့ ကြုံနေရသကဲ့သို့ … … …
အမှန်တရားကို မပြောရဲ မဆိုရဲ ကျိတ်မှိတ်ခံစား နေကြရဦးမလား။
အမှန် အမှား ခွဲခြားမသိ … မျက်စိမှိတ် နားပိတ် အမှောင်တိုက်ထဲမှာ ပြောသမျှယုံ ကြုံသမျှ ခံ နေကြရဦးမလား။
နိမ့်ကျသည့် ပညာရေး စနစ်ဆိုးကြီးထဲမှာ စမ်းတ၀ါးဝါး သင်ကြားကြရဦးမလား။
ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးကောင်းမရှိ၊ ငွေမရှိလျှင် သေရမည့်ဘ၀မှာ ကျင်လည်ကြရ ဦးမလား။
၀င်ငွေ ထွက်ငွေ မမျှတ၊ တနေ့လုပ်လို့ တနေ့ နပ်မှန်အောင်မှ စားကြရပါ့မလား။
အူမ-မတောင့်သည့်အတွက် သီလ-မစောင့်နိုင်ဘဲ … စာရိတ္တတွေ တစထက် တစ ယိုယွင်း ချိနဲ့လာကြလေမလား။
သူတပါး တိုင်းပြည်မှာ မျက်နှာ အငယ်ခံပြီး ရုန်းကန်ကြိုးစား နေကြရဦးမလား။
ရေ-မီး မရှိ နိမ့်ကျသည့် လူမှုဘ၀ မှာ နေထိုင်ရင်း … ဟိုပြေး ဒီပြေး နက်ဖန်အတွက် စိတ်မအေး နိုင်တဲ့ အဖြစ် မျိုးတွေ ကြုံတွေ့ရ လေဦးမလား။
ငါတို့ မျိုးဆက်များ ငါတို့ကဲ့သို့ မခံစားရစေရန် …. ဘ၀ အာမခံချက် ရှိရန် ငါတို့အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် ကြိုးစား လုပ်ဆောင် ရမည် မဟုတ်ပါလော ….။
နောက်လူများ ငါတို့လို မဖြစ်ရလေအောင် …
စွမ်းဆောင်ကြဖို့ အရေးသည် ငါတို့အားလုံး၏အရေး …။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ - ရက်
(နှစ် ၆၀ -ပြည့် ပြည်ထောင်စုနေ့)
Posted by မေဓာဝီ at 7:34 AM9comments
Posted by မေဓာဝီ at 8:57 AM5comments
ဇာတ်ဆရာ … ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးကို ခဏခဏ ကြားဖူးနေကျပါ။
ဇာတ်ခုံပေါ်က မင်းသမီးတွေ ဟာ .. ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်က ဇာတ်ဆရာကြီးရဲ့ အလိုကျ … ဆိုရ ကရ သလို …လောကဇာတ်ခုံ ပေါ်က လူသားတွေဟာလည်း ကံဇာတ်ဆရာ စီမံသမျှ ခံကြရပေတယ် လို့ တင်စားချက် တွေလည်း ကြားခဲ့ နာခဲ့ ဖူးပါရဲ့။
ဇာတ်ဆရာ ကိုယ်တိုင်ကရော …. ဘယ်သူ့အလိုကျ လှုပ်ရှားနေရပါသလဲ … ။
မကြာသေးခင်က ဆရာကြီးဦးတင်မိုးရဲ့ “ဇာတ်ဆရာ” ဆိုတဲ့ကဗျာလေး “ဟစ်တိုင် ၀က်ဘ်ဆိုက်” မှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
ဆရာကြီး ကဗျာထဲက ဇာတ်ဆရာလို လူမျိုးတွေ လောကမှာ ဘယ်လောက်များ ရှိနေမလဲ။
ငါဇာတ်ဆရာပဲ … ငါ့ဇာတ်ငါ ဘယ်လိုပဲ က-က ဘယ်သူ့မှ ဂရုစိုက်စရာ မလိုဘူး ဆိုတဲ့ အတွေးလိုမျိုး ကိုယ်ပိုင်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ် လုပ်ချင်ရာ လုပ်နေသူတွေ ဘယ်လောက်များ ရှိနေမလဲ … မသိပါဘူး။ ဒီလို လူမျိုးတွေ များလေလေ …လောကကြီး ကြောက်စရာ ကောင်းလေလေ ပါပဲ။
ဇာတ်ဆရာ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ရင် ကြည့်သူတွေ တပ်လန်ပြီး ရုံကြေးတွေ သူ အကုန်ရမယ်၊ ဒါပေမဲ့ … တခါပဲ ရမယ်လေ၊ နောက်ဆို ဒီဇာတ် ဘယ်သူမှ လာကြည့်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဇာတ်ထဲက မင်းသမီး မင်းသားတွေလည်း တဇာတ် မကောင်း တဇာတ်ပြောင်း ကြပြီး နောက်ဆုံး … ဇာတ်ခေါင်းကွဲရုံပေါ့။
ဇာတ်တဇာတ်မှာ ဇာတ်ဆရာ အရေးကြီးသလို … တိုင်းပြည် တပြည်မှာလည်း အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်သူက အရေးအပါဆုံးပဲ မဟုတ်လား။ ကဗျာထဲက ဇာတ်ဆရာ လိုမျိုးသာ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်သူဟာ လုပ်ချင်ရာ လုပ်လို့ကတော့ဖြင့် … တိုင်းပြည် အိုးစားကွဲတော့မှာပဲ လို့ … ဇာတ်ဆရာ ကဗျာလေး ဖတ်မိရင်းက တွေးမိတွေးရာ တွေးနေမိပါတော့တယ်။
Posted by မေဓာဝီ at 5:58 AM3comments
အမေ ခရီးထွက်ရာက ပြန်လာတော့ ကျမအတွက် လက်ဆောင်တွေ ပါလာပါတယ်။ အဲဒီ လက်ဆောင်တွေ ထဲကမှ … ထူးထူးခြားခြား ကျမ အလွန်နှစ်သက်မိတဲ့ လက်ဆောင် ကတော့ … စာအုပ်ကလေး တအုပ်နဲ့ စီဒီ တချပ်ပါပဲ။
ကျမက စာရေး စာဖတ် ၀ါသနာပါတာမို့ အမေက ဘယ်ကိုပဲ သွားသွား ကျမ ကြိုက်မယ်ထင်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေ တွေ့ရင် ယူလာပြီး ကျမဖတ်ဖို့ ပေးတတ်တယ်။ သူကြုံလာခဲ့တဲ့ ဒေသန္တရ ဗဟုသုတတွေလည်း ကျမကို စီကာပတ်ကုံး ပြောပြတတ်တယ်။ အခု ဒီစာအုပ်နဲ့ စီဒီကလေး ကိုလည်း ကျမကြိုက်မယ်လို့ ဆိုပြီး တကူးတက ယူလာခဲ့တာပါ။
စာအုပ်ကလေးက ၂၀၀၆ နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက် (ပါတော်မူနေ့) အမှတ်တရ ထုတ်ဝေတဲ့ စာအုပ်ကလေးပါ။ ရေးသူက ဒေါက်တာလှဘူး တဲ့။
“ဗမာပြည်က နောက်ဆုံး ဘုရင်နဲ့ မိဖုယားကို အင်္ဂလိပ်က ဖမ်းခေါ်သွားပြီး အိန္ဒိယကို ပို့ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ များနဲ့တကွ နောက်ခံ အဖြစ်အပျက်များကို အမှတ်ရစေဖို့၊ သမိုင်းကို မမေ့ကြစေဖို့ သတိပေးချင်တဲ့ စိတ်ကူးရပြီး ဒီစာစောင်လေးကို ရေးဖြစ်ပါတယ်”
လို့ ဒေါက်တာလှဘူးက စာအုပ်ရဲ့ အမှာစာ မှာ ရေးထားပါတယ်။
စာအုပ်ထဲမှာ သမိုင်းကြောင်းတွေ အပြင် မင်းတုန်းမင်းကြီးရဲ့ ပုံ၊ သီပေါမင်းနဲ့ စုဖုရားလတ်ရဲ့ပုံ အပါအ၀င် သီပေါမင်းရဲ့ အမတော်-နှမတော်ရဲ့ ပုံ တွေ၊ စုဖုရားကြီး- စုဖုရားလေး တို့ရဲ့ ပုံတွေ၊ သမီးတော်နဲ့ မြေးတော် ပုံတွေလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် သီပေါမင်း လက်ရေးနဲ့ အင်္ဂလိပ် အစိုးရထံကို လစာတော်တိုးပေးဖို့ အသနားခံထားတဲ့ စာလေးတစောင် လည်း ပါပါသေးတယ်။ ခရစ်နှစ် ၁၈၉၈ ဇူလိုင် ၂၅ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ရေးတဲ့စာလေးပါ။
“ … … … အကျွန်ုပ်၌ မည်သူ တစုံတယောက်မျှ ပေါင်နှံ ရောင်းချ ချေးငှားကြမည့် သူမရှိ၊ လက်ငင်းငွေ ပေးမှသာလျှင် အရပ်ရပ်ကို ပြုလုပ်ဝယ်ခြမ်း နိုင်သည်ဖြစ်ပါ၍ ယခုထောက်ပံ့ ထားသော ငွေ ၃၀၀၀ နှင့် မပြည့်စုံ နိုင်ပါသောကြောင့် ၄င်းငွေ ၃၀၀၀ တွင် ထပ်မံ တိုးတက် ချီးမြှင့်ပါလျှင် ချမ်းသာစွာ သုံးနိုင်မည်ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ် အပေါ်၌ ကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ပါမည့် အကြောင်း … … …”
ဒီစာလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါက်တာလှဘူးက ခုလို ရေးထားပါတယ်။
“နန်းကျ ဗမာဘုရင်ဟာ ကိုယ့်တိုင်းပြည်နဲ့ ထီးနန်းကို မတရား လုယူသွားတဲ့ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်ဆီက အောက်ကျ နောက်ကျ ခံပြီး ပိုက်ဆံ လက်ဖြန့် တောင်းရတဲ့ ဘ၀ကို ဘယ်လောက်များ ရင်နာ စိတ်ဆင်းရဲ လိုက်မလဲ။ စဉ်းစားကြည့်ရင် အင်မတန် ခံပြင်းစရာ ကောင်းပါတယ်။ … … … ဘုရင်တစ်ပါး အနေနဲ့ ဒီလိုရေးရတာ ဘယ်လောက် အောက်ကျမယ် သိမ်ငယ်မယ် ဆိုတာ သီပေါမင်း နေရာက ၀င်ပြီး ခံစားကြည့်ပါ”
ဒီစာအုပ်နဲ့ တွဲပါတဲ့ စီဒီလေးထဲမှာတော့ သီချင်း ၃ ပုဒ်ပါပါတယ်။ စိန်ပါတီ သီဆိုတဲ့ ပါတော်မူ သီချင်းနဲ့ ရွှေပြည်ကြီး သီချင်းပါ။ နောက်တပုဒ် ကတော့ ဂီတလုလင် မောင်ကိုကို တီးတဲ့ ပါတော်မူ သီချင်း တီးလုံးချည်း သက်သက်ပါပဲ။
ပါတော်မူ သီချင်းကို ရွှေတိုင်ညွန့်ကရေးပြီး ရွှေပြည်ကြီး သီချင်းကိုတော့ နန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင်က ရေးဖွဲ့ပါတယ်။ ဖတ်ရှုခံစား နိုင်စေဖို့ သီချင်းစာသား လေးတွေပါ ရိုက်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ရေး -ရွှေတိုင်ညွန့်၊ ဆို - စိန်ပါတီ
ရတနာပုံ နေပြည်၊ မင်းဆယ့်တစ်ဆက် အုပ်စိုးခဲ့သည် .. အုပ်စိုးခဲ့သည် ..၊ ရှေးရှေးတုန်းကတော့ အလွန် သာယာစည်၊ သီပေါရာဇာ နန်းစံ ခုနစ်နှစ်မှာ ဖြစ်ရတဲ့ အရေးကို တွေးမိပါတော့သည်။
မြန်မာပြည် ဇာတ်လမ်း ရှုပ်သမျှကို ရွှေကညစ်နဲ့ ရေးကာ စာကိုစီ၊ ရာဇဌာနီ မြနန်း အရုပ်ဇာတ်မှာ ဧကရာဇ်နဲ့ ဝေးတာ ကြာလေပြီ၊
တစ်ထောင့်နဲ့ နှစ်ရာ လေးဆယ် ခုနစ်ခု နှစ်မှာအတည်၊ တန်ဆောင်မုန်း လဆုတ် ရှစ်ရက်နေ့ ကိုတော့ မမေ့နိုင် ပါပြီ … ယနေ့တိုင်ပြီ .. ၊ ရေမြေ့ရှင်ကို ယူငင်သွားတော့ လူရှင် အများတို့က ကြေကွဲကြလို့ ရေနည်းငါးပုံညီ၊ သြော် .. သီပေါရာဇာ ပါတော်မူလေပြီ။
* (ကိုယ့်ဘုရင် ကိုယ့်သခင်ကို မျှော်မှန်းရည်၊ ယနေ့တိုင် မမေ့နိုင် ပါတော့သည်။)
ဘီဒိုပေါ်ကို မောင်နှံတင်လို့ ဆောင်ပျံ အရှင် ဇာတာနွမ်းလို့ မြန်းရရှာလေပြီ၊ သမ္ဘာအလီလီ တအားယုတ် စေဖို့၊ အာဠ၀ီ တံခါးကထုတ်လို့ ရာဇာသမုတိကို ဆောင်သည်။ မဟာမုနိကိုတောင် ဖူးမျှော်ချင် ရက်ကယ်နဲ့၊ ဦးတော် မတင်ခဲ့ရ ရှာလေပြီ။
ရွှေမှန်ကင်း အစစ်က ထင်းဖြစ်ခဲ့တာ ကြာပြီ၊ ရေစီးတခါ ရေသာတလှည့်စီ၊ အမိမြန်မာပြည်၊ တိုင်းမြန်မာပြည်၊ ရွှေတိုင်ညွန့်က စာစီ ဘုန်းတန်ခိုးနဲ့ တိုးတက်ကြတော့မည်။ ရွှေနန်းရှင်ကို ထင်မြင်ကာ လွမ်းတော့သည်။
ရေး - နန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင်၊ ဆို - စိန်ပါတီ
သြော် …ရွှေပြည်ကြီး (ဘယ်အခါမှ နီးရပါ့ စည်ထီးနဲ့ ကွာခဲ့ပြီ)
သာသနာ့ ဒါယကာ ရာဇာ မရှိတာကြာပြီ၊ ယခုအခါ သူတပါး နိုင်ငံ ပိုင်စံကြတဲ့ မင်းမြတ်ရာဇာ စုံစုံညီညီ၊ လူမျိုးခြားများ မေးသော် မြန်းသော်၊ နန်းတော် တခုသာ .. မန္တလေးက နန်းတော် တခုသာ ကျန်ပါတော့သည်။ ဘယ်အခါမှ ဆိုသလို နေပြည် ရွှေပြည်ကြီး နီးချင်လှပြီ။
အထက်လွှတ်တော်ကိုလဲ လျှောက်လွှာ ဆက်မည်၊ အောက်လွှတ်တော်ကိုလဲ လျှောက်လွှာဆက်မည်၊ သြော် ကျွန်ဘ၀က လွတ်ကြရအောင် စီမံဖန်သော လမ်း၊ ကျမတို့ရဲ့ ဆရာအတည်၊ နန်းတော်ရှေ့ စာစီ၊ သာကီမျိုးတို့ တန်ခိုးကြီးခဲ့ပြီ။ ဘယ်အခါမှ နီးကြပါတော့မည်။
*(သြော် .. သခင်ရေ ..မျှော်ရင်း လွမ်းလှပြီ၊ သြော် .. ကိုယ်တော်ရေ ..မျှော်ရင်း လွမ်းလှပြီ
သြော် .. သခင်ရေ ..မျှော်ရင်း လွမ်းလှပြီ၊ ရွှေပဟိုရ် စည်သံများ မကြားရတာ ကြာပါပြီ … ရှစ်စုံထီးနဲ့ ရွှေပြည်တော်ကြီးဆီ။)
ရွှေပြည်ကြီး နီးအောင်ပင်လှမ်း၊ နန်းရိပ်ကယ်လှုံ၊ ရွှေဘုံဟံသာ ကွန်းဆီက၊ ယွန်းနတ်ကယ်စီ၊ ဒေါင်းမြီးကွက်တွေ လျှမ်းချိန်မို့ .. လွမ်းပြန်ရသည်။
ပြသာဒ်ဖျားဆီက စိန်သွားရောင်ခြည် ပဟိုရ် နှစ်ချက်တီးပြီထင့် ညည်းမှိုင်မိသည်။
ဒီစာအုပ်ကလေး ဖတ်ရင်း ဒီသီချင်းလေးတွေ နားထောင်ရင်း တချိန်က ကိုယ့်ထီး ကိုယ့်နန်း ကိုယ့်ကြငှန်းနဲ့ လျှမ်းလျှမ်း တောက်ခဲ့တဲ့ ရွှေပြည်ကြီးကို စိတ်ကူးနဲ့ မှန်းဆ ကြည့်မိပါတယ်။ ဒီလိုမှန်းဆ တွေးတောရင်းကနေ … အနန္တသူရိယ အမတ်ကြီးရဲ့ မျက်ဖြေလင်္ကာကို အမှတ်ရမိပြန်တယ်။
ယူတတ်ရင် သံဝေဂ ရစရာပါ။ တိုင်းပြည် တပြည်ကို အုပ်ချုပ် မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ ဘုရင်တပါး … အားလုံးက တလေးတစား ဘုရားထူး နေရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး တောင်မှ နောက်ဆုံးမှာတော့ နိမ့်ကျတဲ့ အဖြစ်နဲ့ ဘ၀ နိဂုံးချုပ်ရတာပါလား။
“ရွှေမှန်ကင်းအစစ်က ထင်းဖြစ်ခဲ့တာ ကြာပြီ” … တဲ့ ရွှေတိုင်ညွန့်က ရေးခဲ့ပါတယ်။ ရွှေတိုင်ညွန့်သာ အခုနေရှိရင် ဘာပြောမလဲ သိချင်လှတယ်။ တချိန်က ကျမတို့ ရွှေပြည်ကြီးဟာ ခုအချိန်မှာ ထင်းတောင် မဟုတ်တော့ပါဘူး …ပြာပုံဘ၀ရောက်နေရပါပကော …။
ပြာပုံထဲက ရုန်းထွက်ဖို့ရာ ကြိုးစားဖို့ကတော့ တဦးတယောက်ထဲကို အားကိုးရုံနဲ့ မရနိုင်ပါဘူး။ အများညီညီ ၀ိုင်းဝန်းကြမှ …ပြာပုံဘ၀က လွတ်မြောက်နိုင်မှာ မဟုတ်လား။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ….ဒေါင်းမြီးကွက်တွေ လျှမ်းလာမယ့် အချိန်ကိုသာ … မှန်းဆ ရမ်းရော်ရင်း …
(မနေ့က ဒီစာကိုရေးပြီးပေမဲ့ ကွန်နက်ရှင်မကောင်းလို့ တင်မရတာနဲ့ ဒီနေ့မှ တင်လိုက်ရပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ရေးသူ ဒေါက်တာ လှဘူးနှင့် ကျမအတွက် တကူးတက ယူလာသော အမေ့ ကို ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း။)
တီးလုံးချည်း သက်သက် နားဆင်လိုပါက …
Posted by မေဓာဝီ at 5:14 AM4comments
Labels: စာအုပ်စင်, သီချင်း
Posted by မေဓာဝီ at 3:00 AM4comments
Posted by မေဓာဝီ at 4:45 AM3comments